တယောက်က FTP com FileZilla Server ကိုအီးက Windows ကနေတဆင့်, HD7– တေလာ Lopes ツဘလော့
တယောက်က FTP com FileZilla Server ကိုအီးက Windows ကနေတဆင့်, HD 7
ထို Post ကိုအတွက်အကျိုးစီးပွားကြောင့် “FTP ကနေတဆင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိသင်၏ HD ရရှိနိုင်ပါစေ“, ငါသည်သင်တို့၏ HD ကို compatilhar နှင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မည်သည့်ကွန်ပျူတာကနေလက်လှမ်းစေရန်တစ်ဦးတယောက်က FTP server ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ခြေလှမ်းဖြင့်ခြေလှမ်းကိုဖန်ဆင်း (ပြည့်စုံသော!).
အဘယ်သူမျှမအရင် Post ကို “FTP ကနေတဆင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိသင်၏ HD ရရှိနိုင်ပါစေ“, ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုဖို့သို့မဟုတ် CesarFTP + Windows XP ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ FTP ဆာဗာထူထောင်ရန်. တောင်မှဒီအချိန်ကပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းအချို့သောရှုထောင့်ဆံ့ဖို့စာဖတ်ခြင်းဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်.
Next Post, ကျွန်တော်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ FTP ဆာဗာတည်ဆောက် FileZilla Server ကို + Windows ကို 7. ဤမျှလောက်များစွာသောပုံရိပ်တွေရှိတယ် (printscreen) နီးပါးရုပ်ရှင်သို့လှည့်သောနားလည်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့ရန် (ချဲ့ထွင်ခြင်း :: D), Avatar နှင့် Elite Squad နှင့်အတူတစ်အော်စကာများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် 2. ထိုအခါ, အပေါ်လာ!
အကို Download လုပ် FileZilla Server ကို ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူရဲ့ website ကနေတိုက်ရိုက်အခမဲ့: http://filezilla-project.org/
installation ရိုးရှင်း: သငျသညျကို download file ကို run; ကိုယ့်အားလုံးအဆင့်ဆင့်အတွက်ရွှေ့, ဘာမှပြောင်းလဲနေတဲ့မပါဘဲ! မည်သည့်အမှုကိစ္စတွင်, သူတို့ဟာသေးငယ်တဲ့ screen ကိုပတ်ပတ်လည်သွား:
FileZilla Server ကို – တပ်ဆင်
FileZilla Server ကို – တပ်ဆင် | နောက်ဆုံးထည်
အင်စတောလုပ်ပြီးတာနဲ့, FileZilla Server ကိုစတင်ပါလိမ့်မည်နှင့်တစ်ဦးပေးတဲ့ dialog interface ကိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်. ရုံတခုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး password ကိုရိုက်ထည့်ပါ, အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း:
FileZilla Server ကို – တပ်ဆင် | အုပ်ချုပ်ရေးမှူး password ကို
မတော်တပို့ခကျြမြား! သင့်ရဲ့ FTP ဆာဗာယခုအဆင်သင့်, ဆက်သွယ်မှုများကိုစောင့်ဆိုင်း.
FileZilla Server ကို – တပ်ဆင် | ပြေး…
သတ်မှတ်ထားသို့မဟုတ်အခြေခံပညာရန်, သင်ရုံအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲများကိုလုပ်ရန်ရှိသည်. ဤအမီနူးမှတဆင့်လုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ် Edit ကို Settings>. မတိုင်ခင်, ငါသည်တ directory ကိုဖန်တီးခြင်းအကြံပြု (ခေါက်ဆွဲ) တယောက်က FTP အဘို့အဘယ်မှာဖိုင်တွေကိုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်. ဥပမာ, ငါ directory ကို D ကိုဖန်တီး:\_အတွင်းအပြင်ဖိုင်နှစ်ခုနှင့်အတူတယောက်က FTP. အခြားစကား, ဒီ directory ထဲတွင်ကြောင်းအရာအားလုံးကိုငါဂြိုဟ်ပေါ်မှာဘယ်နေရာမှာမဆိုမှ FTP များအတွက်ရရှိနိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ကဘာလဲ.
FTP ကို ​​directory ၏အဓိပ္ပာယ်
ဘယ်မှာဆာဗာလိမ့်မည်သည့် port ကိုပြောင်း “နားထောင်” ၏ 21 အတွက် 2100. အထူးဂရုပြုရန်: ဒါဟာမဆိုအခြားဆိပ်ကမ်းရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမဲ့ဒီဆိပ်ကမ်းကိုနောက်ပိုင်းတွင် firewall ကများနှင့် Router ကိုသော့ဖွင့်ဖို့အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းသတိရ, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်တယောက်က FTP အားဖြင့်အကြောင်းအရာဝင်ရောက်ဖို့လိပ်စာရဲ့အစိတ်အပိုင်း. ငါအရင်ပို့စ်တွင်ရှင်းပြခဲ့သည်ဤ Mundaca များအတွက်အကြောင်းရင်းများ, အချို့သော ADSL ပံ့ပိုးပေးဖို့ကို default တယောက်က FTP ဆိပ်ကမ်းပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ဒါပေမယ့်တို (21):
ချိတ်ဆက်ဖို့အသုံးပြုသူတစ်ဦး Add / authentication ကို, အဘယ်သူမျှမကိစ္စ, ငါအသုံးပြုသူဖန်တီး “admin ရဲ့”. ထို့ပြင် directory များထည့်ပါ (ခေါက်ဆွဲ) သင်မျှဝေလိုသည့်ဖိုင်များနှင့်အတူ, သူတို့ရဲ့ access ကိုခွင့်ပြုချက်ပေးခြင်း (စာဖတ်ခြင်း, ကျမ်းစာ၌လာသည်). directory ကို D ကိုအောကျမေ့:\_ငါဖန်တီးတယောက်က FTP? ဤနေရာတွင်တက်ဖြင့်သူ့ကိုကွညျ့ရှု:
passive mode မှာဆက်သွယ်မှုဆိပ်ကမ်းများ၏အကွာအဝေး Enter. အဘယ်သူမျှမကိစ္စ, ငါဒါအကွာအဝေးရတဲ့ port တစ်ခုတည်းအသုံးပြု: 2101-2101. ဖြစ်ဖို့ FTP ကို ​​default အနေနဲ့ဆိပ်ကမ်းနေသော်လည်း 21 (ကျွန်တော်ပြောင်းရွှေ့ 2100), ဒါကြောင့်ဒီဆိပ်ကမ်းကိုသာအသွားအလာထိန်းချုပ်မှုအဘို့အကြောင်းလူသိများသည်; ဒေတာစီးဘို့, ဒါဟာထိရောက်စွာတံခါးကိုအသုံးပြုသည် 20 (ကျွန်တော်ပြောင်းရွှေ့ 2101):
အထူးဂရုပြုရန်: သငျသညျမျိုးစုံကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းဆက်သွယ်မှုများကိုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေလျှင် (တယောက်က FTP), က passive mode ကိုရဲ့ဒီဆိပ်ကမ်းကိုအကွာအဝေးကိုတိုးမြှင့်ဖို့အကြံပြုသည်, အချို့သောကြင်နာများအတွက် 2101-2301. ရှင်းလင်းသော, သငျသညျအဲဒီ ports ကို reset ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်, တယောက်က FTP အပြင် (FileZilla), ထို့ပြင် router ကိုနဲ့ firewall အပေါ်. တစ်ဦးက passive ဆက်သွယ်မှု, client ကိုလွှဲပြောင်းတောင်းဆိုမှုစေသည်သောအခါ, (တယောက်က FTP), သို့မဟုတ် server ကို, ကစောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိသည် (liabilities) ဆက်သွယ်မှုများကို, ဒေတာဖလှယ်ကြလိမ့်မည်ဆိပ်ကမ်းမှ client ကိုကိုပြောတယ်အဘယ်သူသည်. တိုင်းအသစ်တောင်းဆိုချက်, ဆာဗာချက်ချင်းအထက်ဆိပ်ကမ်းကိုအသုံးပြုပြီး Client ကိုချိတ်ဆက်ပြီး, အဘယ်ကြောင့် data ကိုဆိပ်ကမ်း၏အကွာအဝေးကိုတိုးမြှင့်သင့်တယ်, တစ်ပြိုင်နက်တည်းဆက်သွယ်မှုများကိုခွင့်ပြုပါရန်ရှိမရှိ. မဟုတ်ရင်, ပြဿနာများပေါ်ပေါက်စေခြင်းငှါမျှော်လင့်ထားနှင့် ခဏပွဲရပ်ခြင်း ဒေတာဆိပ်ကမ်းသောကွောငျ့ 2101 ထူးခြားတဲ့ဖြစ်, အဆက်ဆက်ဆက်သွယ်မှုများကိုတစ်ဦးကလေးကိုရှိကွောငျးဒါ, အသုံးပြုနေစဉ်တွင်ဆိပ်ကမ်းဖောက်သည်များအတွက် reserved ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက.
အခမဲ့ Firewall နဲ့ Router က
တည်ငြိမ်သော, တည်ငြိမ်သော! ဒါဟာသင့်ရဲ့ FTP ဆာဗာကိုစမ်းသပ်ဖို့အချိန်မဟုတ်ပါဘူး. ဒီခြေလှမ်းဝေဖန်ဖြစ်ပါသည်! အများစုဟာပြဿနာတွေသင့်ရဲ့ FTP ကိုအလုပ် firewall ကနှင့် / သို့မဟုတ် Router ကအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ဆက်စပ်လုပ်မပေးနိုငျ. ထိုကွောငျ့, ခြေလှမ်းကိုမီးရှို့ကြပါဘူး, ခြေလှမ်းများကခြေလှမ်းအတိုင်းလိုက်နှင့်ပျော်ရွှင်စေ.
Windows အမီနူးကို Start> Control Panel ကို> System ကိုနှင့်လုံခြုံရေး> Windows Firewall ကိုကိုသွားပါ.
လက်ဝဲဘက် link ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “Windows Firewall ကိုတဆင့် program တစ်ခုသို့မဟုတ်အင်္ဂါရပ် Allow”:
ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “အခြားပရိုဂရမ် Allow…”:
ထိုရှာတွေ့ “FileZilla Server ကို Interface ကို”, ဒါကြောင့်ကို select လုပ်ပါနှင့် button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “ပေါင်း”:
သတိပြုပါသို့မဟုတ် “FileZilla Server ကို Interface ကို” ပြီးသား၏စာရင်းထဲတွင်ပေါ်လာသော “အစီအစဉ်များနှင့်ခွင့်ပြုသယံဇာတများ”. ဥပဒေရေးရာ!
ယခု, ပင် Windows Firewall ကိုအတွက်, လက်ဝဲဘက် link ကို click နှိပ်ပြီး “advanced settings”. ဖမ်းယူနားဆင်နေပါ, ကျွန်တော်တံခါးကိုအလှတျမညျအဖြစ် 2100 အီး 2101 အဘယ်သူမျှမ Firewall ကို Windows ကိုပြုပါ:
ကလစ်နှိပ်ပါ “ဘက်ကစည်းကမ်းများ” ပြီးတော့ “အသစ်နည်းဥပဒေ…”:
ကို Select လုပ်ပါ “ပရိုတိုကောများနှင့်ဆိပ်ကမ်း”, ပစ္စည်းစစျဆေး “တံခါးပေါက်” နှင့် button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “တိုးတက်”:
အ item ကို Select လုပ် “တိကျတဲ့ဒေသခံဆိပ်ကမ်းများ” လာမည့်တံခါးစာသားလယ်ပြင်၌ရိုက်ထည့် 2100 အီး 2101, အစောပိုင်းက FileZilla setting တွင်သတ်မှတ်ထားသောအဖြစ်. အထူးဂရုပြုရန်! သင်သည်အခြားဖို့တံခါးတွေကိုပြောင်းလဲလိုလျှင်, ထိုအခါ, ကြေးဇူးပွုပွီး, လွန်းကဒီမှာကိုပြောင်းလဲ, ဒါပေမဲ့, ဒါဟာအလုပ်မဖြစ်မည်မဟုတ်. ဤအမှုကိုပြု, ကလစ် “တိုးတက်”:
နိယာမ, ပစ္စည်း “ဆက်သွယ်မှု Allow” ဒါဟာပြီးသားမှတ်သားသည်. ရုံကိုကလစ်နှိပ်ပါ “တိုးတက်”:
အားလုံးရှေးခယျြထားရွေးချယ်စရာနှင့်အတူ, ကလစ် “တိုးတက်”:
စိုးမိုးရေးအတွက်နာမည် Give. ငါခေါ် “တယောက်က FTP”:
မကြာမီ! Firewall ကို configuration ကိုပြီးသားပြု! စိုးမိုးရေးကိုကြည့်ပါ “တယောက်က FTP” သောတံခါးဝကိုဖြန့်ချိ 2100 အီး 2101 ကို Firewall ပြီးသားအတွက်ပါဝင်သည်ဟုဖြစ်ပါတယ် “ဘက်ကစည်းကမ်းများ” Firewall ကို Windows ကိုပြုကြ:
ဒါ့အပြင်သင့်ရဲ့ NAT Router ကို configure (ကြိုးမဲ့ ou ကြိုး), အကယ်. သင်, ဒါကြောင့်ပြင်ပအသွားအလာများလွှဲပြောင်းလွှတ်ပေးရန်နိုင်အောင် (အင်တာနက်ကို) တံခါးပေါက် 2100 (ကျွန်တော်တို့ရဲ့တယောက်က FTP ကွန်နက်ရှင်ဆိပ်ကမ်း) သင့်ရဲ့ FTP ဆာဗာလည်ပတ်ကြောင်းကွန်ပျူတာ. အသေးစိတ်ကို, Post ကိုမြင် “FTP ကနေတဆင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိသင်၏ HD ရရှိနိုင်ပါစေ“. သို့ရာတွင်အဘယ်သူမျှနက်နဲသောအရာဖြစ်ပေရှိပါတယ်, စိတ်ကူးတံခါးဝ၌သင့် router အရာအားလုံးကိုပြောပြရန်ဖြစ်ပါသည် 2100, သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုဘယ်မှာ FileZilla မှ redirected ခံရ, ပြထားတဲ့အတိုင်း:
အထူးဂရုပြုရန်: အချို့ကိစ္စများတွင်, သငျသညျတံခါးဝကိုလည်း Router ကတဆင့်အသွားအလာ redirect ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကိုပြန်လုပ်ဖို့လိုပမေ 2101 (ကျွန်တော်တို့ရဲ့ FTP ကိုဒေတာဆိပ်ကမ်း).
ထို့အပွငျ, ကို disable SPI option ကိုအကြံပေး (ပြည်နယ်အစုံလိုက်သုံး packet စစ်ဆေးခြင်း) Router ကို firewall က, ရှုံးနိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ထို့ကြောင့် input ကိုစီးဆင်းမှုပိတ်ဆို့ခြင်းကတည်းက. အဆိုပါ SPI သူတို့ကိုကွန်ယက်ဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုရှေ့တော်၌ထိုသတင်းအချက်အလက်များလက်ခံရရှိ packets တွေကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးတဲ့နည်းပညာ.
တယောက်က FTP access ကို
နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ FTP ဆာဗာကိုစမ်းသပ်. ဒီနည်းလမ်းများစွာအတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်, သူတို့တွင် (1) ဝဘ်ဘရောက်ဇာ, (2) Windows Explorer ကိုသို့မဟုတ်ဖွငျ့ (3) FTP client တစ်ခုလျှောက်လွှာတဆင့်.
တစ်ဘုံပြဿနာဖုန်းခေါ်ဖို့ protocol ကိုအပေါ်မှားယွင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်. မှန်ကန်သော protocol တစ်ခုဖြစ်သည် “ftp://”, မဟုတ်ရင်သင်တစ်ဦးအမှား type ကိုရလိမ့်မည် “500 syntax အမှား, command ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရ” (ဤအမှုသည်ငါ့မှဖြစ်ပျက်မပါဘူး, hahaha):
ရဲ့ဒေသခံတစ်ဦး access ကိုအောင်ကနဦးစမ်းသပ်ကြည့်ကြကုန်အံ့. ဤအတွက်, လိပ်စာ bar မှာသင့် browser နှင့်အမျိုးအစားဖွင့်လှစ်: ftp://127.0.0.1:2100. ကျွန်တော်တို့ဆိပ်ကမ်းကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်ကြောင်းမှတ်ချက် 2100 ထို IP ၏အဆုံး! မကြာခင်မှာပဲတစ်ဦးရဲ့ login box ကိုရောက်ရလိမ့်မည်, တောင်းဆို authentication ကို. သငျသညျ FileZilla ၏ user ကို setting ကို configuration ကိုအတွက်သတ်မှတ် username နှင့် password ကိုသုံးပါ:
ရှိသမျှကောင်းဝင်ခဲ့လျှင်, ၏ contents တွေကိုပြပါလိမ့်မယ် “တယောက်က FTP” ကျွန်တော်တို့ FileZilla မသတ်မှတ်, ယထာဘူတကျသော, သင့်လျော်သောအသုံးပြုသူ access ကိုခွင့်ပြုချက်ကိုလေးစား. အကြောင်းအရာငါ D ကိုအတွင်းအပြင်ခဲ့မှတ်ချက်:\_အကြှနျုပျ၏ HD ကိုအပေါ် FTP ကိုဤနေရာတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်:
အလားတူ Windows Explorer ကိုအတွက်ဖြစ်ပျက်. ထိုသို့ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဝင်ရောက် ftp://admin@127.0.0.1:2100. ငါအသုံးပြုသူအသုံးပြုခဲ့တဲ့မှတ်ချက် “admin ရဲ့” အတူတူအိုင်ပီပြုပါ, အချို့ကိစ္စများတွင်ကတည်းက, အကြောင်းကြားမဟုတ်လျှင်သင်ကျရှုံးစေခြင်းငှါ,:
ယခုငါတို့ပြည်တွင်းဖြစ်အလုပ်လုပ်သော (127.0.0.1), ကျွန်တော်တို့ပြင်ပမှလည်ပတ်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးတရားဝင်အင်တာနက်ကိုအိုင်ပီဖြင့်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မည်သည့်ကွန်ပျူတာကနေ FTP ဆာဗာ access လုပ်နိုင်. သင့်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့ IP ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်, ဒါဟာအများအပြားပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်. ငါ site ကိုအသုံးပြု http://meuip.info/, အခြားနှင့်အတူ:
လွယ်ကူသော, မုချ? အဲဒီမှာသည်ထင်ရှားကြောင်းဤ IP ကို ​​ယူ. ဒေသခံ IP ၏အရပျ၌အသုံးပြုရန် 127.0.0.1 (အစားထိုးဖို့). ထို protocol ကိုတယောက်က FTP ကြောင်းကိုသတိရပါ:// အိုင်ပီပြုပါနောက်တော်သို့လိုက်, နှစ်ခုအချက်များ (:) နှင့်တစ်ဦး porta တယောက်က FTP (2100). ဒါဟာရဲ့ login dialog box ကိုမှီတိုငျအောငျစက္ကန့်အနည်းငယ်ယူမှဖွစျနိုငျ.
အဆိုပါအကြောင်းအရာအောင်မြင်သောအင်တာနက် browser ပေါ်တွင်ပြသ!
Windows Explorer ကိုခုနှစ်တွင်လည်းချောချောမွေ့မွေ့ပြေး. တူတစ်ခုခုရိုက်ထည့် ftp://admin@189.75.34.242:2100.
ကျနော်တို့က HD ကိုအကြောင်းအရာမြင်ရုံအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော (: D:\_တယောက်က FTP) ဒါဟာပုံပေါ် 100%. ကောင်းသော, ဒီ Post ကိုလက်စသတ်, ငါစံပြမှန်ကန်သည့် IP ကိုအသုံးပွုဖို့မဟုတျကွောငျးကိုအောကျမေ့ချင်, ကအဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲသောကြောင့်,. ထိုအခါ, ငါအရင်ပို့စ်တွင်ရှင်းပြခဲ့သည်အဖြစ်, ထိုချမှတ်နေဖြင့်ဤပြဿနာကိုပတ်ပတ်လည်သွား DynDNS သို့မဟုတ် no-အိုင်ပီ. ကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်!
စုစုပေါင်း access: 158740
9 အောက်တိုဘာလ 2010 တေလာ Lopes	FileZilla server ကို. FileZilla, ftp, hd ကို, ပြတင်းပေါက် 7, ပြတင်းပေါက်ခုနစျပါး
118 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း “တယောက်က FTP com FileZilla Server ကိုအီးက Windows ကနေတဆင့်, HD 7”
Pingback: FTP ကနေတဆင့်အင်တာနက်ပေါ်ရှိသင်၏ HD ရရှိနိုင်ပါစေ « တေလာ Lopes :: ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ် :: ကွန်ပျူတာများ
အိုကေ, otimo post ကိုအလွန်ကောင်းစွာကရှင်းပြခဲ့သည်ခဲ့သည်, သို့သော်, အရာအားလုံးပြင်ပ ip ထားရန်အချိန်ကာလမရောက်မှီတိုင်အောင်ငါ့အဘို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ (189…) ပြည်တွင်းရေး ip နှင့်အတူ
ငါ၏အစက်ကောင်းသောအတွက်အလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါ ip ကိုတင်ကြသောအခါထားပြီးဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ပေးသော funfa မှတ်မိ modem မ
Router ကအမြစ်. အကြှနျုပျ၏ router သည် DSL 2640T နှင့် SPI option ကိုပြီးသားပြင်ပ access ကိုအတူနီးပါးအရာအားလုံးနှင့်မကြိုးစားခဲ့သောကြောင့်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး… သောပြဿနာဖြစ်လိမ့်မည်???????????????
18 ဇန္နဝါရီလ 2011 သို့ 0:05
တေလာ Lopes ကပြောပါတယ်:
ဒီတစ်ခါလည်းသင်သည်နှစ်ကြိမ် routing မဟုတ်ပါဘူး? အချို့သော ADSL modems လည်း router များအဖြစ်ပြုမူသည်ကို, နှစ်ဦးစလုံးအပေါ် NAT ရှိကို configure လုပ်ထားရမယ်… ငါကိုအောက်တွင်အပ်ပေးသည်ကိုသင်တို့အဖြေအတွက်ကအသေးစိတ်ကြည့်ရှု, သို့မဟုတ်ဖြေကြားကြောင်းအခြားပို့စ်တွင်တစ်ဖတ်ယူ: http://taylorlopes.com/?p=1021. ဒီရက်သတ္တပတ်တစ်ဦးအသိအကျွမ်းပြင်ပကနေရယူမနိုင် (အင်တာနက်ကို) အတွင်းအပြင်များအတွက် (LAN), ငါသည်လည်းသည် router ခဲ့သည့် modem GVT ခဲ့. ထိုအရပ်မှ, Virtual Server ကို modem ကို configure လောက်မကြေ, ကြိုးမဲ့ router ကိုညွှန်ပြ, နှင့်ကြိုးမဲ့ Rodeador အ FileZilla Server ကိုအတူစက်မှညွှန်ပြ, ပြီးတော့အလုပ်သို့ထွက်သွားလေ၏. အရေးပါတဲ့အသေးစိတ်, ငါဘာကြောင့်မသိရပါဘူး, alguns ဖက်ရှင် (သို့မဟုတ်အော်ပရေတာ GVT) အ loopback မသွားပါစေပါဘူး, အခြားစကား, ပြင်ပလိပ်စာမှဝင်ရောက်ခွင့်, သင်က local network အတွင်းဖြစ်သည့်အခါ. ဥပမာအား: သင့်ရဲ့ network ကသင့်ရဲ့ DynDNS URL ကိုအပေါ်တစ်ဦးကွန်ပျူတာအသုံးပြုခွင့်, အရာတစ်ခုခုနဲ့တူ http://meuftp.dyndns.org:2100. ဤကိစ္စတွင်အတွက်, လာသောအခါအတွင်းအပြင် (LAN), အ FTP ဆာဗာသည်အဘယ်မှာရှိရှိနေရင် LAN IP ကိုသို့မဟုတ် host name ကို access နှင့်, သောအခါထွက် (တနေရာရာမှာ, သင်၏ကွန်ယက်ပြင်ပမှာ), ၎င်း၏ DynDNS ဒိုမိန်းသို့မဟုတ်တရားဝင်အင်တာနက်ကိုအိုင်ပီများအတွက်လက်လှမ်းမီ. Falouuu…
19 ဇန္နဝါရီလ 2011 သို့ 20:11
ရှင်ပေါလုက B. Boldrini ကပြောပါတယ်:
ငါနားမှာ3ပုဂ္ဂလိကတစ်ဦးတယောက်က FTP server ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကြိုးစားနေနာရီ.
အခြေခံအားဖြင့်ပြင်ပ HD ကိုမှဖိုင်များကိုရွှေ့ (ထိုမှတ်စုစာအုပ်ချိတ်ဆက်) အဘို့ဒါမှမဟုတ် Android, အရှိနေရင် LAN နှစ်ဦးစလုံး (ဝိုင်ဖိုင်) ပြင်ပဆက်သွယ်မှုများအတွက်အဖြစ် (မိုဘိုင်းအင်တာနက်, အခြား Wi-Fi network ကို).
သင်သည်အဘယ်သို့တကယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်ပြသ, ငါသည်တ modem UOL ပိုင်ဆိုင် (SpeedTouch 510) Netgear router ကိုမှအီး (MR814 v2) နှင့် modem နှင့် Router ကိုနှစ်ဦးစလုံးပေါ်တွင်ဆိပ်ကမ်းများလွှတ်ပေးရန်, ဒါဟာဆာဗာ setting နားမှာ (netbook) နှင့်ပြည်တွင်းရေးပြင်ပ access ကိုအလုပ်လုပ်မရသောအခါ, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့အစွန်အဖျားလိုကျလြှောကျဖို့, နှင့် Router ကိုမှ modem port ကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်ဆာဗာမှသတ်မှတ်ထား (netbook)…. ဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့.
web ပေါ်မှာကိုတွေ့အမျိုးမျိုးသောလဲ tutorial ၏, Eh ၎င်း၏အများဆုံးအသေးစိတ်.
(ငါဆိုက်ကို Feed လက်မှတ်ရေးထိုးရမည်)
27 ဇန္နဝါရီလ 2013 သို့ 1:50
ငါနိုင်မဖြစ်ကြောင်းကိုကွညျ့ရှု. ဖြောင့်မှားယွင်းမှုတစ်ခု ပေး. ငါ့အ internal network ကိုသုံးပြီးသင်ခန်းစာနှင့် browser မှာနောက်သို့လိုက်, ငါသာအရှာဖွေသူနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်. ထိုကွန်ယက်ကိုပြင်ပကအင်တာနက်ကိုဘာမှဝင်ရောက်မ (browser ကိုဒါမှမဟုတ်ရှာဖွေသူငါခွင့်မပြုတာပါဟုမက်ဆေ့ခ်ျကိုမြင်ပေးသည်). ဆိပ်ကမ်းအခမဲ့ Ja, ယခုပင်ငါ့အကွန်ယက်ကိုအဖြစ် firewall ကနှစ်ဦးစလုံးပြတင်းပေါက်ပြန်လွတ်လာ, ငါဆာဗာငါ install လုပ်, ငါ့စက်မှထောက်ပြနှင့် configured. Ta အလွန်ရှုပ်ထွေးကြောင့်. မည်သူမဆိုငါ့ကိုအကူညီပေးနိုင်ပါသည်?
20 မေ 2013 သို့ 19:40
ဒါဟာပြဿနာပိုကောင်းအသေးစိတ်သင်ကောင်းတဲ့လိမ့်မည်; အမှားပေးခြင်းသည်ဟုဆို, ဘယ်လိုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမှု၏ (ရေဒီယို, gvt, …). FileZilla အတွက် Log in ဝင်ရန်ရှိကြောင်းမှတ်ချက်. ဒီမပါဘဲ, ကူညီရန်ခက်ခဲသည်, ငါမျိုးစုံစက်တွေနဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပေါ်မှာဤ installation ကိုပြုသောအမှုပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့်, မုချ. မိနျ့တျောမူ၏!
20 မေ 2013 သို့ 20:00
တံခါးကိုစမျးသပျသောအခါထည့်ပါ 2100 ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတဆင့် http://www.t1shopper.com ဤသတင်းစကားသည်ထင်ရှား:
-187.11.104.198 ဆိပ်ကမ်းအပေါ်တုံ့ပြန်ဖြစ်ပါတယ် 2100 (amiganetfs).
ငါက connection ကိုပြင်ပေးဖို့အဆင်ပြေသည်ယုံကြည်အဘယျသို့?
18 ဇန္နဝါရီလ 2011 သို့ 0:20
Oi, ဒီတံခါးကိုသင့်ရဲ့ modem / Router ကမှပွင့်လင်းကြောင်းဆိုလိုသည်, ဒါပေမယ့်ကြောင်းအတည်ပြုရန်သင့်တယ် “virtual ဆာဗာ” (NAT) သငျသညျ FileZilla Server ကိုတပ်ဆင်ထားသည်အဘယ်မှာရှိကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့ IP ဖို့ညွှန်ကြားနေကြပါတယ်. ပြင်ပကနေဆက်သွယ်သောအခါငါပြဿနာများနှင့်အတူအချို့သောလူမြင်ကြပြီ (အင်တာနက်ကို) အတွင်းအပြင်များအတွက် (LAN), နှစ်ကြိမ်လမ်းကြောင်းမသိဘဲသောကြောင့်,… ဒါဟာအချို့ modems လည်း router များဖြစ်ပါတယ်, ထိုအရပ်မှ, ဤကိစ္စတွင်အတွက်, တိကျသောအစုသို့မဟုတ်နှစ်ခုစလုံး NAT, အခြားစကား, modem ADSL ပြုပါ (ထို့ပြင် router ကိုရာဖြစ်ပါသည်) နှင့် Router က (ပုံမှန်အားဖြင့်ကြိုးမဲ့). အခြားရွေးချယ်စရာ, ဒါဟာတံတား mode မှာအလုပ်လုပ်မှ ADSL Modem ကို configure ဖို့ဖြစ်ပါတယ် (ပိုတငျး), ညာဘက်အ ADSL mode ကိုတဆင့်စီးဆင်းဖြတ်သန်းစေနှင့်ကြိုးမဲ့ router ကိုမှသွား, ကြောင်းကိုပင်အော်ပရေတာနှင့်အတူ pppoe authentication ကိုလုပ်နေတာဖြုန်းသင့်ပါသောသူသည်. မိနျ့တျောမူ၏, t ကို +
19 ဇန္နဝါရီလ 2011 သို့ 19:59
မာစဲလိုအဘိဓါန် Chamorro Avendaño ကပြောပါတယ်:
ကျေးဇူးတင်စကားတေလာ, ငါ passive ဆက်သွယ်မှုများ၏ပြဿနာခဲ့, ကျွန်တော်တို့အများကြီးအတွေးအခေါ်များမျှဝေနိုင်မယ့်ကြီးမားတဲ့ပွေ့ဖက်မျှော်လင့်ချက်, ကြေးဇူးတငျစကား
22 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2011 သို့ 20:38
Ola တေလာ, ဒီ bonito. သို့သော်လည်းငါသည်လွှတ်ပေးမှုရတဲ့မဟုတ်ပါဘူး, ငါ folder ထဲမှာမရှိခွင့်ပြုချက်ရှိသည်သတင်းစကားက q ထဲက qdo access ကို. ပြီးသားပြတင်းပေါက်အပေါ်ကိုသုံးဖိုင်တွဲတစ်ခုက q ဝေမျှဖို့ကြိုးစားနေမေး being'm. ဂျာက q ဖိုလ်ဒါ၏လွှတ်ပေးရန်သိကြိုးစားခဲ့, ငါမိုက်ခရို qlqr လျော့နည်းကာ FTP access. ၏သင်တန်းတစ်ခုခုလုပ်ဖို့ left!! ဒါဟာအကူအညီနဲ့ရှိပါတယ်?
7 မတ်လ 2011 သို့ 11:52
Oi, ပထမဦးဆုံးသင်ပြည်တွင်းဖြစ်ကိုစမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်, အခြားစကား, အပိုဒ်အဖြစ် settings ကိုလုပ်, သင့် browser နှင့်အမျိုးအစားဖွင့်လှစ်: ftp://127.0.0.1:2100 သို့မဟုတ် ftp://localhost:2100, ရှင်းလင်း, ငါသည်တံခါးအသုံးပြု 2100, သက်ဆိုင်လျှင်လိုက်ခြင်းကိုပြောင်းလဲ. Windows ကိုသဖြင့် folder ကိုဝေမျှဖို့မလို! ရုံတယောက်က FTP ကိုယ်တိုင်ကအဘို့အခွင့်ပြုချက်ပေး. တစျခုမှာအရေးကြီးဆုံးအရာတယောက်က FTP အသုံးပြုတဲ့ Firewall ကို TWO ဆိပ်ကမ်းများအတွက်လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်. ငါသည်တံခါးအသုံးပြု 2100 (ပညတ်တော်တို့ကိုသွားရောက်) နှင့် 2101 (ဒေတာစီးဘို့). အကယ်လို့ Firewall ကိုလွှတ်မထားဘူးဆိုရင်, ဒါဟာအလုပ်မဖြစ်မည်မဟုတ်. တဖန်ကြိုးစားပါ, ခြေလှမ်းများကခြေလှမ်း, အတိအကျအပိုဒ်၌ရှိသကဲ့သို့. ထိုအခါသင်သည်သင်၏အပြောင်းအလဲများကိုလုပ်ပြီးနောက်. ကောင်းသော, ပြည်တွင်းဖြစ်အပြေး, သို့ဖြစ်. သင်တို့သည်ထွက်ကိုစမ်းသပ်သင့်ပါတယ်, အခြားစကား, အင်တာနက်ကို. ဤကိစ္စတွင်အတွက်, ထိုအကြံပြုချက်များကိုပုဒ်မအတိုင်းလိုက်နာ, အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ၏မှတ်ချက်များကိုဖတ်, အရာအားလုံးကိုဒဏ်ငွေဖြစ်လိမ့်မည်, အိုကေ? ကြေးဇူးတငျစကား!
8 မတ်လ 2011 သို့ 9:33
ဒါဟာတစ်ခုခုမှားယွင်းသည် 50x ကျော်ကြိုးစားခဲ့သည်, nehum လမ်းအလုပ်လုပ်ပါတယ်မထုတ်. ငါကငါ့အ ADSL များအတွက်သော့ခတ် .NET သူတို့သည်င်ထင်. dribbling certinho, ငါမ-ip ပေမယ်တိုက်ရိုက်မဟုတ်အလိုတော်ကိုသုံး. အ tuto ဘို့တောင်မှကျေးဇူးတင်စကား. ကျေးဇူးတင်စကားတွေအများကြီး. မိနျ့တျောမူ၏
16 မတ်လ 2011 သို့ 17:27
ထိုသို့ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုမြင်ရဖို့ antivirus ကိုနဲ့ firewall ကို disable လုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ… သငျသညျနှစျဦးတယောက်က FTP ဆိပ်ကမ်းများလွှတ်ပေးရန်ရန်ရှိသည်သတိရ: 20 အီး 21 (သို့မဟုတ်ဦး FileZilla ထားပြီတ, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် 2100 သို့မဟုတ် 2101). နောက်ထပ်အသေးစိတ် FileZilla ဦးဖော်ပြခဲ့သည်ဖြစ်နိုင်ချေပြဿနာတွေစစျဆေးနိုငျတဲ့ Log ရှိကြောင်းဖြစ်ပါသည်.
31 မတ်လ 2011 သို့ 17:02
ဆှဲငငျ, ကတယ်, သာထို option တွေမှာ Passive mode ကိုဆည်တည်းအတွက်အပြီးတွင် IP ကိုအသုံးပြုပါကိုရှေးခယျြ. ယခုလိမ့်မည်!! ပှေ့ဖကျ!
16 မတ်လ 2011 သို့ 17:43
သငျသညျရင်ဆိုင်ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းမျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဆက်ဆက်အခြားအစေခံတော်မူမည်, Falouuu…
16 မတ်လ 2011 သို့ 18:51
ငါ၏အ router ကို Zinwell ZPlus G880 ဖြစ်ပါတယ်ရင်ဆိုင်ရငါ့ကိုသှနျသငျ!
ငါသည်ငါ့ကွန်ယက်ကိုကတ်ကိုအပေါ် fixed သောအိုင်ပီမှတဆင့်ပြည်တွင်းမှာ Access ကို, လည်း wirelass မှတဆင့်ဝင်ရောက်ခွင့်အပါအဝင်, စဝ်ကိုးကားသူတို့အားလုပျထုံးလုပျနညျးနဲ့ငါ့ကွန်ယက်၏အပြင်ဘက်လက်လှမ်းမစမ်းသပ်စစ်ဆေး.
အဘယ်သို့ငါလိုခငျြ no-ip ကိုဖန်ဆင်းသောကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်မှတဆင့်ဝင်ရောက်ခွင့်ကြသည်ခဲ့သည်2ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာ ence ရိုက်ထည့်သောအခါ ftp://name.hosts:8221 ညွှန်ပြအဖြစ်အဆုံးစွန်သောဆာဗာ FileZilla အပေါ် configured ဆိပ်ကမ်းဖြစ်ပါတယ်.
11 ဇွန်လ 2011 သို့ 19:46
Rafael ALVES FARIAS ကပြောပါတယ်:
က ip မေးတယ်သောကွောငျ့ဦးလယ်ပြင်၌အရာတစ်ခုခုတင်
24 ဇွန်လ 2013 သို့ 14:09
တေလာ, အ tute အတှကျကြေးဇူးတငျငါပိုက်ကွန်ကိုအပေါ်တွေ့ရတဲ့အကောင်းဆုံးခဲ့, တဖန်ငါ့အမှု၌ငါအပြင်ဘက်အပေါ်ကို run လို့မရဘူး; သူကများသောအားဖြင့်အင်တာနက်ကိုဘာမျှမကျော်မှာ localhost အပေါ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်, အ Melial သူ username နှင့် password ကိုမေးလျှင်နည်းနည်းပိုပြီးသို့ဝင်သည်မဟုတ်ဟုဆိုသည်နှင့်အတိုးတက်အဘယျသို့ပွုခဲ့. ငါ၏အမှုကိစ္စငါ mac ကွန်ယက်ကိုကတ်ကိုထုတ်ပြန်သောကြောင်းတစ်ကေဘယ်လ်အင်တာနက်ရှိသည်အောက်ပါဖြစ်ပါသည်, ငါသည်လည်း WAN cofiguraro cable ကိုအတူတစ် wireles router ကိုသုံးပါနှင့်ငါ့မအတွက်ကြိုးမဲ့ signal ကိုသုံးပါနှင့် Router ကအပေါ်မှာငါ့ desktop ပေါ်မှာငါတံခါးကိုပြန်လွတ်လာနှင့် spi ပြီးသားမသန်စွမ်းခဲ့.
30 မတ်လ 2011 သို့ 13:27
သို့ပြောသည်ခငျြးမြားကိုတက်အဖြစ်, သငျသညျနှစျဦးတယောက်က FTP ဆိပ်ကမ်းများလွှတ်ပေးရန်ရန်ရှိသည်သတိရ ... ဒါကြောင့်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုမြင်ရဖို့ antivirus ကိုနဲ့ firewall ကို disable ဖို့ကြိုးစား: 20 အီး 21 (သို့မဟုတ်ဦး FileZilla ထားပြီတ, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် 2100 သို့မဟုတ် 2101). နောက်ထပ်အသေးစိတ် FileZilla ဦးဖော်ပြခဲ့သည်ဖြစ်နိုင်ချေပြဿနာတွေစစျဆေးနိုငျတဲ့ Log ရှိကြောင်းဖြစ်ပါသည်.
31 မတ်လ 2011 သို့ 17:03
ပျောက်ဆုံးဘယ်မှာငါမသိရပါဘူးဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဆက်သွယ်မှုဖွဲ့သောနောက်ဆုံးအနည်းငယ်အချိန်လေး FileZilla server ကိုကုန်ဆုံးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ, ငါ၏အကွန်ယက်၏အပြင်ဘက်ကိုငြင်းပယ် access ကိုမတွက်ပါ.
ငါ antivirus ကို Panda ကို Global ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရှိသည်နှင့်ငါ့အ router ကို GTS Telecom က AP စူပါပါဝါဖြစ်ပါသည်, ငါငါတို့အဆှ၏ပညတျတရားအတွက်စာတစ်စောင်မှအရာအားလုံးကိုနောက်တော်သို့လိုက်နှင့်ယခုအထိမျှအောင်မြင်မှုရှိခဲ့ပါတယ်!
ဖြစ်နိုင်ရင်ငါတစ်စုံတစ်ဦးကငါ့ antiviris နှင့်အထက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ wirelass ရေဒီယိုကိုစောင့်ရှောက် configuration ကို enabled ကိုကူညီနိုင်လျှင်ဤ blog ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းငါသည်လမ်းခရီးအတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုရင်အတိုင်းလိုက်နာရန်ခြေလှမ်းများကအလွန်လွယ်ကူပါတယ်သကဲ့သို့ငါဧကန်အမှန်အထိပါလိမ့်မယ်သောကွောငျ့သိလိုပေမယ့်, ပင်ငါဖြစ်၏အဖြစ်တကယ်တော့ငါဆဲငါ့အ antivirus ကိုအတူဘေးကင်းလုံခြုံတည်းခိုကြိုက်တတ်တဲ့ကြောင်း layman ဒါပေမယ့်ငါပြင်ပမှအကြှနျုပျ၏ ftp access နိုင်ဖြစ်ခြင်းမစိတ်ပျက်မိပါတယ်.
20 ဧပြီလ 2011 သို့ 4:00
antivirus ကိုပိတ်လိုက်ဖို့ထောက်ခံချက်ကြောင့်တယောက်က FTP connection ကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လျှင်ပဲမြင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်. သူဆိုရငျ, ထို့နောက်သင်တယောက်က FTP application သို့မဟုတ်ဆိပ်ကမ်းလွှတ်ပေးရန်စအချို့သော configuration ကိုကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုဒီလိုလုပ်ဖို့အသီးအသီး antivirus ကိုအတွက်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်. ထိုကွောငျ့, ဒါဟာ antivirus ကိုကင်းလွတ်စေခြင်းငှါမဖြစ်, ပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာတွေ့မှသာလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်!
သငျသညျအင်တာနက်ရေဒီယိုကိုသုံးလျှင်, ထို့နောက်ပြင်ပမှ function ကိုမှပြီးသားဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်. ကြေးဇူးပွုပွီး, ကြည့်ယူ:
အဆိုပါအချက်ကိုသင်ပထမဦးဆုံးပြည်တွင်းဖြစ် FTP ကိုပုဂ္ဂလိက messenger ကိုအလုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း. ထိုအခါဟုတ်ကဲ့ကအင်တာနက်ပေါ်ရှိ run ဖို့ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသည်. ဒီအဆင့်အတွက်ပြဿနာများကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကူညီပေးသည်. ah, သူ့ကိုအလုပျလုပျဖို့အတှကျလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်က posted, သူတွေမှာ Passive mode ကို setting ကိုအတွက်အိုင်ပီပြီးနောက် FileZilla အသုံးပြုခြင်း၏ထို option ကိုသုံးခဲ့ရတယ်. ဤနေရာတွင်ကြိုးစားကြည့်ပါ…
ငါသည်သင်တို့ကို e-mail ဖြင့်ပြုသမျှအခြားမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်ထွက်သွားရန်ဤအခွင့်အလမ်းကိုယူ:
ပုံမှန်အားဖြင့်အ NAT ဒါခေါ်သယံဇာတများနှင့်အတူပြု “virtual server ကို” အီး “port forwarding”, သင့် IP နှင့်ဆိပ်ကမ်းပေါ်တွင်အခြေခံဆုံးဖြတ်ထားသည် micro ဖို့ input ကိုဒေတာစီးလွှဲပြောင်းထက်ပိုပြီးဘာမှမရာဖြစ်ပါသည်. ပထမဦးစွာဒေသခံတယောက်က FTP ကွန်နက်ရှင် funcinando အတွက်ဖြစ်ရပါမည် 127.0.0.0, သငျသညျပြောဆိုကြပြီကြောင့် ok ဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်သင် NAT ထား. သာပျောက်ဆုံးခံရဖို့ပုံရသည်. သငျသညျကိုအင်တာနက်ကနေလာမယ့်တစ်ဦးတယောက်က FTP တောင်းဆိုမှုလုပ်မြင်ယောင်ကြည့်ပါ (ဥပမာအား, အတွက်ပေါ်ထွန်းရဲ့ IP ကိုအသုံးပြုပြီး http://meuip.info). ဒါဟာဤတောင်းဆိုမှုကိုသင့် router မှလာကြလိမ့်မည်ကြောင်းထွက်လှည့်, ကပေါ်လာသောထိုကဲ့သို့သော IP ကိုရရှိထားသူသောသူသည် http://meuip.info. ကောင်းသော, ပြင်သို့, သင့် router သင်ဘယ်မှာဤတောင်းဆိုမှုကိုကိုပေးပို့ဖို့ပွောဆိုရန်ရှိသည်ဖြစ်ပါသည်. က (Router က) ကိုယ်ရောစိတ်ပါသင်တစ်ဦးတောင်းဆိုချက်ရသည့်အခါတိုင်းသင်သိရ (ဝန်ဆောင်မှု) တံခါးကို 21 (သို့မဟုတ် 2100, သို့မဟုတ်တစ်သတ်မှတ်တော်မူကြောင်းကို), သူတို့စက်တပ်ဆင်ထားသည် FileZilla မှစီးဆင်းမှုပေးပို့သင့်ပါတယ် (FTP ဆာဗာ). အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်, ဒါဟာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး!
အဆိုပါ Updater မျှ-ip သို့မဟုတ် dyndns FileZilla သို့မဟုတ်သင့် router ၏ DDNS option ကိုအသုံးပြုဘယ်မှာသင်ဤ machine ပေါ်တွင် install လုပ်ရမည်ဟုဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပါသည်, ထောက်ခံမှုအမှု. ဒီ Updater ကိုသင့်ပူအိုင်ပီလျှင်အချိန်ကနေအချိန်ကိုမြင်လျှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် (ip ကိုအင်တာနက်, ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်တ http://meuip.info) ပြောင်းလဲမ.
သင့်ရဲ့ဒိုမိန်းကြောင်းယူဆကြကုန်အံ့ ftp://gilmar.dyndns.org:2100. သင်သည်သင်၏ဘရောက်ဇာကိုလိပ်စာဘားထဲသို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါ, ဒါဟာမေးခွန်းအတွက်ဒိုမိန်းများအတွက်တောင်းဆိုမှုစတင်သည်, အဘယ်သူသည် dyndns.org အံ့သြ. dyndns ရောက်ရှိလာသော, သငျသညျကိုတောင်းပါလိမ့်မည်, သောမှန်ကန်သည့် IP gilmar. မှန်ကန်သည့် IP ပိုင်ဆိုင်မှု, ၎င်း၏ Updater အားဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားသော, ထို့နောက်requisãoဤ IP နဲ့အတူသောပစ္စည်းကိရိယာများမှညွှန်ကြားထားသည်. သို့ပြောသည်နှင့်အတူ, အဘယ်သူသည်ဤ IP ရရှိသွားတဲ့သင့်အိမ်သည် router သည် (က q VC အငျတာနကျပျေါတှငျတိုကျရိုကျသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုချိတ်ဆက်မဟုတ်လျှင်, အအိုင်ပီရှိသည်မယ်လို့သူအသင်၏ micro ရှိပါလိမ့်မယ်). Router ကိုအပေါ်ရောက်ရှိလာ, သူကိုမေးပါလိမ့်မယ်, အဘယ်သူကိုငါတံခါးဝ၌ကြွလာသောဤတောင်းဆိုချက်ကိုပေးပို့ 2100? ဤသည်ဘယ်မှာသင့်ရဲ့ NAT ဖြစ်ပါသည်, ဘို့ကတယောက်က FTP ဝန်ဆောင်မှုဆိပ်ကမ်းလင့်ထားသည်လိမ့်မည်သောသူသည် (သင့်အမှု၌ဖြစ်ပါသည် 2100) စက်အ ftp server ကိုပြေးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအတူ. ရှင်းလင်းသော, ဒီစက်ကိုတစ်ဦး fixed အိုင်ပီရှိသည်ဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်, အချို့သောမျိုးကို 192.168.0.10. set ကိုအိုင်ပီချိန်းအဖြစ်အင်တာနက်ကိုကြည့်ရှု, အဘယ်သူမျှမနက်နဲသောအရာသည်.
22 ဧပြီလ 2011 သို့ 9:10
ငါကဒီမှာကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖတ်: အောက်ပါအိုင်ပီ em တွေမှာ Passive mode ကိုဆည်တည်းကိုသုံးပါ!
ဤအမှုသည်ငါ့ပြင်ပ access ကိုမှအရာအားလုံးကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါသလား?
23 ဧပြီလ 2011 သို့ 18:52
ငါမသိ, မြင်ဖို့ကြိုးစား. ငါ၏အမှုကိစ္စများတွင်, မလိုအပ်…
23 ဧပြီလ 2011 သို့ 20:06
dofabricante GTSTelecom ငါ၏အ Router ကလက်ခံရရှိ:
domestica အတွက် IP ကိုလုံခြုံရေးသင်သည်ကွန်ယက်နှင့်ဒါကြောင့်သင်အဆင့်မြင့်ချိန်ညှိသွား / LAN,
နှင့်ပြုပြင်တာတွေ DHCP ကတင်းကျပ်, ထို MAC ခံယူသင့်ကြောင်းသုံးစွဲသူရဲ့ MAC နှင့် IP အိုင်ပီထား Enable, နှင့်စာနယ်ဇင်း Apply, ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကွန်ရက်ပေါ်တွင်အသီးအသီးကို client များအတွက်ဖျော်ဖြေရဦးမည်.
ဒီဒေတာကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်ထွက်ပေါက်မှဖြေရှင်းချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နှင့်ငါ့ ftp ပြင်ပမှဝင်ရောက်သည်?
23 ဧပြီလ 2011 သို့ 19:23
တကယ်တော့သင်ရုံ FileZilla ပြေးသော IP ကိုချိန်းကွန်ပျူတာထားခဲ့ရန်လိုအပ်ပါတယ်. ဒါကကွန်ပျူတာပေါ်မှာတိုက်ရိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ် (အကြံပြု) ဒါမှမဟုတ် Router မှတဆင့်, ညွှန်ပြ Router ပံ့ပိုးမှုအဖြစ်. ဤကိစ္စတွင်အတွက်, သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုအ Router ချိတ်ဆက်အခါတိုင်း, ထိုသို့ရဲ့ MAC ကို detect နှင့်သင်သတ်မှတ်ထားသောတူညီသော IP သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့.
ဒီအဘယ်သူမျှမဖြေ, ဒါဟာဖြေရှင်းချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်. ငါမဆဲကောင်းစွာဘယ်လို NAT မှ၏ဒိုင်းနမစ်နားမလည်ဘူးထင်. ဒါပေမယ့်ဒါ, ကမကြာမီအရာအားလုံးကိုဖြေရှင်းသည်…
23 ဧပြီလ 2011 သို့ 20:05
ငါသည်ဤတုံ့ပြန်မှုကိုလက်ခံရရှိပေမယ်ငါသည်ငါ့ဒေသခံ network ပေါ်မှာအိုင်ပီနှင့်ငါ့ fixed အိုင်ပီကြောင်းနိုင်ရေးအတွက်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိကြပါသောကြောင့်, ဘယ်မှာသွားယခုမသိရပါဘူး 192.168.1.4
200.171.76.8 သူကဆိပ်ကမ်းအပေါ်တုံ့ပြန်မပါ 2100 (amiganetfs).
23 ဧပြီလ 2011 သို့ 19:52
သငျသညျတံခါးကိုမဖွဆေိုမဟုတ်နေတယ်ဆိုရင် 2100 သင့် router configured သည်မလို့ပဲဖြစ်ပါတယ် (NAT).
Router ကအင်တာနက်ကိုမှန်ကန်သည့် IP လက်ခံရရှိရန်လိုအပ်ပါတယ်! Router ကို configuration ကိုစာမျက်နှာအတွက် STATUS က Check, သူပြင်ပ IP ကိုယူပြီးရဲ့အဘယ်အရာကိုမြင်ရန် (သက်တမ်းရှိ BE လုပ်ရမှာ). သင့် router မှန်ကန်သည့် IP ကိုလက်ခံရရှိသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင့်ရဲ့အင်တာနက်ရေဒီယိုကနေတဆင့်သည်အဘယ်ကြောင့်ထိုသို့ဖြစ်နိုင်သည် (သင့်ရဲ့မှန်ကန်သည့် IP ပေးခွငျးအားဖွငျ့ shared ဖြစ်ပါတယ်: လှည်ရှိလိမ့်မည်!!!) သို့မဟုတ်သင့် ADSL Modem ကိုအားဖြင့်လည်းတစ်ဦးသည် router ဖြစ်နိုင်, အခြားစကား, သူသည်မှန်ကန်သည့် IP ကြာနှင့်သင့် Router များအတွက်အအေး IP ကိုပို့ပေး (ရုံရှိခြင်းကမှတ်ချက်2လမ်းကြောင်း), အင်တာနက်ကို network ကိုအတူ interfacing မပါဘဲအရာဖြစ်ပါသည်.
သငျသညျလုံးဝဘာသာရပ်ပေါ်တွင်လဲလျောင်းနေတယ်ဆိုရင်, ငါ NAT အကြောင်းမှာ google အပေါ်ရှာဖွေတစ်ယူပြီးအကြံပြု, သက်တမ်းရှိအိုင်ပီ, ကူညီတဲ့နည်းပညာရှင်မခေါ် networks သို့မဟုတ်, အကယ်. မ , ဒါဟာနာကျင်စေနိုင်ပါတယ်.
23 ဧပြီလ 2011 သို့ 20:16
သငျသညျ MSN အပေါ် TC မိနစ်အနည်းငယ်၏အဘယျထင်ပါသလဲနှငျ့သငျငါရင်ဆိုင်ရသောတူညီပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ကိုကူညီငါကဲ့သို့သောအခြား duvidos အသုံးပြုသူများအဘို့ဤအရပ်၌ထား TC ရှိအရာအားလုံးကိုပေး, သင်ပို့နိုင်သ3ငါ coo နတ် compicado တာပါလယ်နဲ့ငါ့ GTS စူပါပါဝါအေပီနှင့်ငါ့ DSLink 200E ၏ထုတ်, ဒေသခံအိုင်ပီ?
ငါ domelo နှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ဧကန်အမှန် ADSL Modem ကို router ကို DSLink ပြီးသားငါ့အ router ကို GTS စူပါပါဝါအေပီဖြစ်ပါတယ် wirelass 200e ဖြစ်ပါတယ်.
ငါပဲအဘယ်သူမျှမ-IP ကို ​​faustino.zapto.org ရှိရာ FileZilla ကဆာဗာကိုစက်ပေါ်ဒီမှာအစီအစဉ်ကို install နေသူများကဖန်တီးဒါပေမဲ့ဒီဒိုမိန်း access ကိုပင်, ဒါပေမယ့်ငါ fixed ကိုသာအ IP ကိုမနိုင် 192.168.1.200 နှင့်တံခါး 2100.
သင့်အနေဖြင့်အခမဲ့ FileZilla သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုအတွက်ဒိုမိန်းကို set up ရမယ်?
23 ဧပြီလ 2011 သို့ 20:58
Fixei အိုင်ပီ 192.168.1.41 အ GTS စူပါပါဝါက AP ပိုပြီးဤ IP ဆိပ်ကမ်းများနှင့်အတူ UDP ကိုကို TCP configured 2100 အီး 2101 အဘယ်သူမျှမ-အိုင်ပီအတွက်ဒိုမိန်း faustino.zapto.org ဒါပေမယ့်ကံမကောင်းနေဆဲဒီဧရိယာဒါပေမယ့်ငါသာဒေသခံလုပ်နိုင် fixed သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့သော IP ကို ​​access မနိုင်.
26 ဧပြီလ 2011 သို့ 2:48
Gilmar hi, တကယ်သင်တက်ပေးခြင်းဘယ်တော့မှ၏သီလရှိ… ငါသိ၏ယောက်ျားတွေကောင်းသောကွန်ပျူတာအမြဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရှိပါတယ်… လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး, ငါကူညီမှတစုံတခုကိုမျှအခကြေးငွေကောက်ခံကြပါဘူး, ဒါကြောင့်ထို site ပြဿနာကိုရှာတွေ့မှအမြန်ကြောင်းအရာမျိုးဖြစ်ဘို့ကထောက်ခံမှုသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းသွားရှောင်ရှားရန်သာ, ဒါပေမယ့်အဝေးကနေကြောင့်လောကီနှင့်အချိန်စားသုံးသည်…
ထိုအခါ, ရဲဘော်, ဒါကြောင့်ကိုယ့်ပြီးတော့အနီးကပ်သင်သည်အသက်ရှင်ဘယ်မှာမှအချို့သောနည်းပညာပိုင်းအဘို့အကြည့်ဖို့အကြံပြု… ကောင်းသော, ငါအရာအခြို့ကိုပြန်လုပ်ပါလိမ့်မယ်, ပေါ့စခွေငျးငှါ…
သင်ပြုရန်ရှိသည်ပထမဦးဆုံးအရာထိုပြဿနာကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ဖြစ်ပါသည်, ဤအတွက်, လုပ်:
(1) သို့မဟုတ် FTP ပြည်တွင်းဖြစ်ကို run (127.0.0.1); site ပေါ်တွင်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, ဒါဟာဝေးလံခေါင်ဖျားအလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်. အစက်အပြောက်စမ်းသပ်မှုလုပ်, သင့် browser ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်တူတစ်ခုခုရိုက်ထည့် ftp://127.0.0.1:2100.
(2) သင့် router မှန်ကန်သည့် IP ကိုအင်တာနက်အားလက်ခံတွေ့ဆုံလျှင်ကြည့်ရှုပါ (ရေဒီယိုမှသူတို့အားပေးသူအဘို့သင့်ကိုအင်တာနက် အကယ်., ဤအရပ်ရှုပ်ထွေး, အမှန်ကန်သည့် IP မဟုတ်သင်တို့အဘို့အလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်, ဒါပေမယ့်တခြားဖောက်သည်နှင့်အတူမျှဝေသည်). Basta entrar na página de configuração do Roteador, သင်တစ်ဦးမှန်ကန်သည့် IP ရှိပါကပုံမှန်အားဖြင့်အခြေအနေ tab ကို, သင်သိပါလိမ့်မယ်. Router ကိုပေါ်သောဤ IP ကိုသင် site ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသောအခါပုံပေါ်သောတူညီသော IP ဖြစ်ရပါမည် http://meuip.info/ (ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောမှန်ကန်သည့် IP ဖြစ်ပါတယ်);
(3) သင်တစ်ဦး ADSL Modem ကိုရှိပါက, အ modem မှန်ကန်သည့် IP ရတဲ့သူမဖြစ်သေချာအောင်. အလားတူပင်, ရုံ modem configuration ကိုစာမျက်နှာရိုက်ထည့်ပါ, သင်တစ်ဦးမှန်ကန်သည့် IP ရှိပါကပုံမှန်အားဖြင့်အခြေအနေ tab ကို, သင်သိပါလိမ့်မယ်;
OBS: အမှန်ကန်သည့် IP သိရ? ပြန်ကြားချက်: ဒါဟာသင်ပြင်ပကနေချိတ်ဆက်ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုဤ IP ဖြစ်ပါတယ် (အင်တာနက်) အတွင်းအပြင်များအတွက်. သင် router သို့မဟုတ် ADSL Modem ကိုအပေါ်မှန်ကန်သည့် IP ခံယူမထားဘူးဆိုရင်, အခြားဖောက်သည်များနှင့်အတူမျှဝေ IP ကိုအသုံးပြုနေသည်ကိုသင်အင်တာနက်ကိုပေးတော်မူသောဖွယ်ရှိသည်, ထိုအရပ်မှ, ဒါဟာအလုပ်မဖြစ်မည်မဟုတ်!
(4) သငျသညျရှိသင့်သောသတိမှန်ကန်သည့် IP ကိုလက်ခံရရှိသူတို့အဘို့ အကယ်. သင့်ရဲ့ ADSL Modem ကိုကြောင့်, ထို့နောက်သင် setup ကိုကထည့်သွင်းခြင်းနှင့်တံတား mode မှာကအရွက်သင့်တယ် (ပိုတငျး), ဒါကြောင့်, ရောက်ရှိရန်အားလုံးဒေတာစီးဆင်းမှု, သင်သည်သင်၏ router ကိုမှညွှန်ကြားပါလိမ့်မည်, ကပင်မှန်ကန်သည့် IP နှင့်အတူသွားသူဖြစ်ပါသည်. ဤကိစ္စတွင်အတွက်, သငျသညျ router ကိုအားဖြင့်သင့် ADSL စစ်မှန်ကြောင်းသက်သေပြရပါလိမ့်မယ်, မ ADSL Modem ကိုအားဖြင့် (ကသာနှင်ထုတ်မည်အကြောင်းကြောင့်). ငါ၏အ DLink Router ထဲတွင်သင် Setup ကို> အင်တာနက်ကို> အင်တာနက်ကော်နက်ရှင်လက်စွဲစာအုပ် Options ကို> အင်တာနက်ကော်နက်ရှင်အမျိုးအစား> ကျနော့်အင်တာနက်ကော်နက်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်အတွက် modem ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသော connection ကို configure : PPPoE (အသုံးပြုသူစကားဝှက်).
(5) နောက်ဆုံး, သငျသညျကိုမှန်မှန်ကန်ကန် NAT ရန်လိုအပ်ပါတယ်, ဆိပ်ကမ်းအပေါ်နားထောငျဖို့သင့် router Configuring 2100 (သင့်ရဲ့ FTP ရဲ့သို့မဟုတ်အခြား) သင့်စက်ရှိရာ FileZilla ဖို့ Router ကစီးဆင်းမှုကိုတဆင့်ပို့ခြင်း.
12 ဇွန်လ 2011 သို့ 10:41
ငါ antivirus ကို Panda ကို Global ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုပိတ်ထားသည် 2011 နှင့်သင်၏ firewall ကိုဆဲ ftp ပေါ်မှာငါ့ဦးထုပ်ကိုယူပြီးစောင့်ရှောက်!
ငါ၏အ GTS Router က၌ငါအချို့ parameters တွေကိုတွေ့ရှိရပေမယ့်မပေး…
သူတို့ဟာများမှာ: domain name ကိုတောင်းဆို DynDNS settings ကို, username နှင့် password ကို
Next ကိုကော်မရှင်အိုင်ပီ-Host ကလိပ်စာတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်
ဘာမျှမလြှော့ငါ၏အ Panda antivirus ကို disable လုပ်ဖို့သကဲ့သို့ငါ၏ ftp ဖို့အဖြေတစ်ခုအဘို့ဤအသစ်ရှာဖွေရေး၌ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား?
26 ဧပြီလ 2011 သို့ 5:07
ငါဆဲနားမလည်ဘူးတစ်ခုတည်းသောအရာငါရှိသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်ပါသည်2အဘယ်သူမျှမက-IP ကိုကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်ကဖြစ်သင့်စဉ်းစား…
ကောင်းသောအခြားသောတည်နေရာ၌ငါ့ FTP ဆာဗာဝင်ရောက်နိုင်ဘဲဖြစ်ပျက်
ငါဆိပ်ကမ်းများနှင့်အတူဖိုင်ကို server ကိုဖွင့်လှစ် 8221 8222 ကို TCP / UDP ကိုငါဒါပေမဲ့ကိုသာငါအတွက်ကဒီမှာ fixed သောအိုင်ပီနှင့်တကွ, router ကိုအပေါ် သွား. အရာအားလုံးကိုပြုသူတို့ပေးပို့အခွင့်အရေးအဖြစ်ပေမယ့်တကယ်တော့ငါမ-ip ၌ငါ့အိမ်ရှင်မှာအကြှနျုပျ၏ ftp FileZilla server ကို access မရနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျကိုငါ့က local network ပေါ်မှာငါ့ IP ကို ​​fixed NIC, ငါဘာမှနားမလည်ခဲ့ဘူး!!!
11 ဇွန်လ 2011 သို့ 19:39
အဆိုပါဒိုမိန်းအဘယ်သူမျှမ-အိုင်ပီသို့မဟုတ် DynDNS အရေးအပါဆုံးမဖြစ်. မှန်ကန်သည့် IP ဖြင့်လည်းသူတို့၏တယောက်က FTP မှဝင်ရောက်ခွင့်အလုပ်လုပ်ပြီးနောက်ဒီဒိုမိန်းကိုသာအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်. ဒီဒိုမိန်းအဘယ်သူမျှမ-IP နဲ့ DynDNS သာသင်၏အမှန်ကန်သည့် IP အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖြင့်ညွှန်ပြနေသည်, နာမတော်အဘို့ဤအရပ်အကြောင်းရင်း (ဒိုမီနို) စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်, အဘယ်သူမျှမအပြောင်းအလဲများကတည်းက. သင့်ရဲ့ FTP ကိုအဘယ်သူမျှမ-အိုင်ပီသို့မဟုတ် DynDNS မပါဘဲသာမန်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်, လက်ရှိတွင်သင့်စက်အားဖြင့်အသုံးတှငျအဘယျအမှန်ကန်သည့် IP သိထောက်ပံ့ (သို့မဟုတ် Router က). ဥပမာအား, သင့်ရဲ့မှန်ကန်သည့် ip ဖြစ်ပါတယ်ယူဆ 189.75.34.242, ထို့နောက်အဖြစ်သင့်တယောက်က FTP access ftp://seuUsuario@189.75.34.242:2100, သငျသညျပုံမှန်အားဖြင့်တော့လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်. သင့်ရဲ့တရားဝင်အိုင်ပီဒီ site ပေါ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်: http://meuip.info/.
အရာအားလုံးသင့်ရဲ့ပြဿနာမှန်ကန်သည့် IP ပြဿနာအတွက်ကွောငျးဖျောပွသ. ငါသည်သင်တို့ကိုခြားနားချက်မှန်ကန်သည့် IP နှင့်အအေး IP ကိုနားလည်သဘောပေါက်ကြပြီမဟုတ်ထင်. လနျ့စရာအလှနျရှင်းပြ, အမှန်ကန်သည့် IP ကိုသင်တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာကနေရအိုင်ပီဖြစ်ပါသည် (DSL, Up ကို dial, စသည်တို့ကို). ဒါဟာသင်အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ရဖို့သောသူနှင့်နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း web ပေါ်မှာထူးခြားတဲ့လမ်းအတွက်ရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်. အိုင်ပီပြီးသားအအေး, သင့်စက်ကိုသင့်ကွန်ယက်တွင်ရရှိသွားတဲ့သောအိုင်ပီဖြစ်ပါသည်, ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့် Router ကိုကပေးအပ်သည် (DHCP). အအေးအအိုင်ပီကိုအင်တာနက်ထဲမှာတရားဝင်မဟုတ်ပါဘူး, သာသင့် network အတွက်! သင်ဤအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုပါလျှင်, ရှာဖွေမှုပြုပါ, အင်တာနက်ပေါ်တွင်သင်ချမ်းအိုင်ပီပ္ပံတွေ့လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်. ထို့ကြောင့်သင်တစ်ဦးသည် IP အဖြစ်မြင်ရပါလိမ့်မည် 192.168.0.1 (မျက်နှာဖုံး 255.255.255.0) ဒါဟာအအေးနှင့်, ရှင်းလင်းသော, သင့် router အအေးမိအိုင်ပီရတဲ့လျှင်, ပင်ကိုအင်တာနက်နှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ပါလိမ့်မည်ဘယ်တော့မှ.
ထိုကွောငျ့, သင့် router မှန်ကန်သည့် IP ရတဲ့လျှင်သင်ပထမဦးဆုံးကြည့်ရှုသင့်ပါ. Basta entrar na página de configuração do Roteador, သင်တစ်ဦးမှန်ကန်သည့် IP ရှိပါကပုံမှန်အားဖြင့်အခြေအနေ tab ကို, သင်သိပါလိမ့်မယ်. Router ကိုပေါ်သောဤ IP ကိုသင် site ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသောအခါပုံပေါ်သောတူညီသော IP ဖြစ်ရပါမည် http://meuip.info/ (ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောမှန်ကန်သည့် IP ဖြစ်ပါတယ်). ထိုမိတ်ဖက်အတူတူမဟုတ်ခဲ့လျှင်, ဒါဟာအလုပ်မဖြစ်မည်မဟုတ်. ထိုအခါသင်သည်မည်သူမဆိုသင်အင်တာနက်ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုရင်မြင်ရဖို့ရှိသည်, တကယ်သင် forncendo မှန်ကန်သည့် IP ဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ကမှန်ကန်သည့် IP မျှဝေသည်ဤအင်တာနက်ရေဒီယိုအတွက်ဘုံက, နှင့်တစ်ဦးချမ်းအေးအိုင်ပီပေး (lascou!). သငျသညျနှစ်ကြိမ် routing လျှင်ပြဿနာဒီလိုမျိုးထုတ်ပေးပြီးကြောင်းနောက်ထပ်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ပြီးသား Router ကသော ADSL Modem ကိုရှိပါတယ်, အခြားစကား, ADSL အင်တာနက်၏နိမိတ်လက္ခဏာ modem / Router ကိုအပေါ်ရောက်ရှိထို့နောက် Router ကမှဝင် (ကြိုးမဲ့သို့မဟုတ်မ). ဤကိစ္စတွင်အတွက်, ငါသည်သင်တို့ကိုသင့်ရဲ့ modem / Router ကို configure အကြံပြု (သောပထမဦးဆုံးအင်တာနက်ကို signal ကိုအားလက်ခံတွေ့ဆုံ) တံတား mode မှာအလုပျလုပျဖို့ (ပိုတငျး), အရှင်စီးဆင်းမှုနှင့်မှန်ကန်သည့် IP ကိုအင်တာနက်အားလုံးသင်၏ကြိုးမဲ့ router ကိုသွား, ပင်သင်သည်သင်၏ပံ့ပိုးပေးသူနှင့်အတူ authentication ကို configure လုပ်ထားရမယ်ဘယ်မှာရာဖြစ်ပါသည် (BRTurbo, Oi, UOL, စသည်တို့ကို).
Falouuu, t ကို +
12 ဇွန်လ 2011 သို့ 11:14
ယနေ့တွင်ငါသည်ငါ့မှန်ကန်သည့် IP လောလောဆယ်တွင်ကိုမြင်လျှင် 189.18.19.252 ငါနားလည်လျှင်မှန်ကန်သည့် IP ကိုငါ့ ISP ကညာဘက်ငါ့ကိုပေးသည်ကားအဘယ်သို့?
ငါကဒီမှာငါ့အ IP ကို ​​fixed 192.168.2.200.
ငါပဲ့ထိန်းအဘယျသို့ VC အတိုင်းလိုက်နာ ftp://gilzinho.zapto.org@189.18.19.252:2100 ထိုသို့မဟုတ်ခဲ့, ဒါပေမဲ့ ftp://gilzinho.zapto.org@192.168.2.200:2100 ဒီနေရာမှာသာပြင်ပမဟုတ်ခဲ့.
ငါရိုးရှင်းသော port forwarding နှင့်အတူဒီနေရာမှာစမ်းသပ်မှုပြုနှစ်ခုစလုံးတံခါးများကိုပျက်ကွက် 2100 အဖြစ် 2101 ငါဖိုင်ကို zilla သတ်မှတ်ထား
အခုတော့ဦး DSL Modem ကို router ကိုအကြောင်းပြောဆိုသောဤနေရာတွင်အကြှနျုပျ၏ modem သည် DSL 500B မျိုးဆက်သစ် link ကိုဖြစ်ပါတယ်!
ငါကိုယ်တော်၌ protocols များလွှတ်ပေးရန်ရှိပါသလား, ငါ့ရှုံးနိမ်များ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်လိမ့်မည်?
အဘယျသို့သောဤ protocol များကအဓိကအကြောင်းရင်းသည်ငါ့ DSL 500B လျှင်လို?
13 ဇွန်လ 2011 သို့ 5:31
ငါတို့သည် FileZilla server ကိုအတွက်မျှဝေသောဖိုင်တွဲကိုရွေးချယ်ထားသည့်အချိန်အမှတ်အသားအားလုံးပုံးချန်ထားလျှင်အပန်းဖြေဖြစ်ပျက်?
11 ဇွန်လ 2011 သို့ 19:55
ငါသည်ငါ့ DSL Modem ကိုဝင်ကြ၏ 500 B ကအသစ် DLink ဒါပေမဲ့ငါကိုပြုလျှင်ငါ navigate ငါ့ modem ကိုမသုံးကြဘူးဒါပေမဲ့ Router ကိုထိုအခါ wirelass ကတံတား mode မှာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်ပြီးတော့ Mecher ကnecessároမဟုတ်ပေမယ့်နတ်ကိုတွေ့သော်လည်းငါ့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် firewall ကိုအတွက်ငါကဆက်ပြောသည်ပြီ တံခါးရွက် 2100 အီး 2101 FileZilla အဘို့နှင့် ftp ထင်နေသူများကဖန်တီး5တူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်ဆိပ်ကမ်းများ 2100 အီး 2101, ငါအရမ်းအပိတ်အဆို့နှင့်အတူအရူးသွားတာပါဒါပေမဲ့လူတိုင်း သို့ဖြစ်. ငါ့ကိုရပ်တန့်မပေးနိုငျနိုငျသောကွောငျ့အကြှနျုပျကိုရရန်ရှိသည်…ကမူးယစ်ဆေးဝါး!!!
13 ဇွန်လ 2011 သို့ 5:47
ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကို ip မအင်တာနက်ကိုပိုမိုအသုံးပြုခွင့်ပေးသည်ကိုငါ ip က q တင်မှာ dynamic အဖြစ် ip ta ရေဒီယိုကနေတဆင့်ပိုက်ကွန်ကို, ငါ့ရေဒီယိုကို client ပါတယ်.
ငါသည်ငါ့အွန်လိုင်း ftp ထားနိုင်မှအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကို?
24 ဇွန်လ 2011 သို့ 23:21
ငါသည်ငါ့ FileZilla server ကိုအောင်မြင်မှုကို set up နိုင်3သူတို့ကဘရော့ဘန်းကိုငါ့ server ကို FileZilla မှသူတို့ကို download လုပ်မြတ်သောသည်အဘယ်မှာရှိရှိပါတယ်သော်လည်းအလွန်နိမ့်မှုနှုန်းပေးတိုင်ကြားသောကြောင့်, ငါ dawnload ငါ၏အ server ကိုပြုပါသောသူတို့အဘို့ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်လျှင်ငါနေဆဲတွေးမိအဘယျသို့အဘယ်သူမျှမပြဿနာတွေနဲ့ရက်ပတ်လုံး.
ပေါ်တူဂီ၌ငါ့အစ်ကိုကသူ့တီးဝိုင်းကို 20MB ရှိပါတယ့်သောတစ် 28kbp မှုနှုန်း / ငါ့ FileZilla server ကို 200MB ကနေဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို download လုပ်ပါ!
ဤတွင်အကြှနျုပျ၏အကြှနျုပျ၏ဘရော့ဘန်း server ကိုအတွက် 2MB ဖြစ်ပါသည်!
သူ့ကိုနှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြဿနာကိုငါ့ server ကို FileZilla အပေါ်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်သလား?
ငါသည်ဤအပေါ်အဖြေရှိပြီးတာနဲ့ကြောင့် fera သည်ကငါ့အဘို့ခက်ခဲခဲ့ပေမယ့်ငါတေလာ Lopes ၏အကူအညီဖြင့်စီမံခန့်ခွဲသောကြောင့်, ငါသည်ခပ်သိမ်းသောအကြှနျုပျ၏အတှေ့အကွုံတည်းဟူသောငါ၏ FileZilla အလုပ်လုပ်စီမံခန့်ခွဲ post လိမ့်မယ်!!!
ငါသာလူကန့်သတ်ရန်ဖို့ဘယ်လိုလည်းလေ့လာသင်ယူရန်လိုခငျြ downloads, နှင့်ပိုပြီးဘာမှမလုပ်နှင့်လည်းအသီးအသီးအသုံးပြုသူများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဖိုင်များကိုပေးဖို့ပိုအသုံးပြုသူများကဖန်တီး.
1 ဇူလိုင်လ 2011 သို့ 2:12
Filezzila Server ကိုအနိုင်ရရှိတပ်ဆင်764 -bits
portas အဖြစ်အခမဲ့ 2100 အီး 2101 ပြုခံရဖို့ရှိပါတယ်အဖြစ် firewall ကများနှင့် Router ထဲတွင်အတူတူ direncionando.
ငါ connection ကိုစမ်းသပ်မှုအမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ FileZilla ဖွငျ့ဖျောပွဆိုက်လုပ် http://ftptest.net/
မတော်တပို့ခကျြမြား! သင့်ရဲ့ server ကိုအလုပ်လုပ်သည်နှင့်ဆင်တူတဲ့ router များ / firewalls များမှန်ကန်စွာလွင်ပြင်အခြေခံပညာတယောက်က FTP ဘို့ configured ပြီ.
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော၎င်း၏အသေးစိတ်ကိုရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့်သင့်ရဲ့ server များ၏အခြားတဦးကိုစမ်းသပ်ဖို့အခမဲ့ခံစားရ.
ငါသည်ငါ၏အဘယ်သူမျှမ-ip ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါ:2100 သူမ
အကြှနျုပျ၏ router ကို ApRouter WR 254HT ဖြစ်ပါသည်
ငါ Win XP တွင်အခြားစက်ပေါ်တွင် install နှင့်အနိုင်ရရှိထားကြောင်းတူညီတဲ့ settings နှင့်အတူချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်ကြပါပြီ 7
30 ဇူလိုင်လ 2011 သို့ 11:27
Claudio - CRS Informática ကပြောပါတယ်:
ငါသည်ငါ့ဒေသခံလွှဲပြောင်းပြဿနာမှအဖြေတစ်ခုကိုရှာဖွေနှစ်ရက်ကုန်. Uso ဏ servidor ဒေသခံ EasyPHP 5.3.6.0 web စာမျက်နှာများဖန်တီးခြင်းနှင့်ဇာတိ server ကိုမရှိပါဘူး. ငါအချို့ဖိုလ်ဒါထဲမှာခွင့်ပြုချက်ပေးခဲ့ရသည်နှင့်သင့် post ကိုငါ့ကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့, တကယ်တော့ငါ့အဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်လုပ်. Tava နီးပါးဆောင်ပုဒ်တက်ပေးခြင်း.
ကြေးဇူးတငျစကား! ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များလမ်းပြ Continue!
Claudio – ရစီးဖီ-PE
1 စက်တင်ဘာလ 2011 သို့ 15:45
Claudio Is – ရစီးဖီ-PE က de Novo. လမ်း, ရုံသင်သည်သင်၏ရေးသားချက်များကိုဝေမျှဖို့ tool ကိုတင်ဦးပျောက်ဆုံးနေ. ငါသည်ငါ့ဖို့ကပေးပို့ချင်ပါတယ် http://twitter.com/#/CrsInformatica.
1 စက်တင်ဘာလ 2011 သို့ 15:49
Claudio hi, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. အဲဒီမှာ link တစ်ခုဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်ပို့စ်ရဲ့အဆုံးမှာ “ဖွင့်လှစ်”, သင်တို့ကိုမျှဝေပေးနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာတကယ်အဖြစ်မြင်နိုင်သည်မဟုတ်, ငါကတိုးတက်လာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်… ပွေ့ဖက်!
1 စက်တင်ဘာလ 2011 သို့ 17:18
ငါနှောင့်ရှက်သောလေထုထဲတွင်အကြှနျုပျ၏ ftp ချပြီးရှိခြင်းခဲ့ကွောငျးကြိမ်ရှိပါတယ်. သင့်ရဲ့ Blog ကိုငါ့အပြဿနာပထမဦးဆုံးဖြေရှင်းခဲ့မှုနှင့်အတူ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
22 စက်တင်ဘာလ 2011 သို့ 10:33
Renata gomes ကပြောပါတယ်:
မှတ်ချက်များအားလုံးကိုဖတ်သို့သော်ဘာမျှမတယ်မပြင်ပမှပိုပြီးပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်း access လုပ်နိုင်
ပုံဖော်ငါ့မြန်နှုန်းတစ်ဦးထိတွေ့ဖြစ်ပါသည် 510 အင်တာနက်ရဲ့ Hi နိမိတ်လက္ခဏာနှင့်အတူ
ယခုပင်ငါဆိပ်ကမ်း configured 21 အီး 20 အသုံးပြုပြီးတော့ configured တစ်ဦးတယောက်က FTP server ကိုရှိပိုင်ဆိုင်
တံခါးဖွင့်လှစ်ရှိပုံပေါ် 21 နှင့်တံခါး 20 tBM
ငါ့ကိုအသားရဲ၏ ai ကူညီ
29 စက်တင်ဘာလ 2011 သို့ 4:42
Oi, ငါသည်သင်တို့ကိုသစ္စာရှိရှိဆောင်းပါး setting ကိုလိုက်လျှောက်ရန်အကြံပေး, ဒါကြောင့်ပြီးသားစမျးသပျပွီးကာလ၏များစွာငါ, ဒါကြောင့်အေးမြအလုပ်လုပ်ခဲ့. ထိုကွောငျ့, FTP က default port ကိုမသုံးကြဘူး 20, မဟုတ် 21. ငါ့ကိုအောက်တွင်မှတ်ချက်သင်သည်လည်းအစေခံစေခြင်းငှါလုပ်, ကြည့်ရှု6အောက်တိုဘာလ 2011 သို့ 20:44. ကောင်းသောကံ!
6 အောက်တိုဘာလ 2011 သို့ 20:49
ငါပြီးသားအရာအားလုံးကို Aki hehehhe အရည်အသွေးကိုတာပါ
29 စက်တင်ဘာလ 2011 သို့ 4:46
တက် replied! T က +
Ivanberg Moreira ကပြောပါတယ်:
ငါအလုပ်မှာ FTP ဆာဗာ mount ခဲ့ရတယ်, ငါအချို့ setting များကိုကြိုးစားခဲ့. မအောင်မြင်ဘူး, ငါသည်သင်တို့၏ပို့စ်တွင်တက်အဆုံးသတ်. လမ်းဖြင့်, အလွန်ကောင်းသော.
ကောင်းစွာ, ငါ၏အပြဿနာတွေသွား, ငါကူညီမျှော်လင့်ပါတယ်.
1. ငါကို download, install လုပ်ပြီးသားနှင့် FileZilla configured, အားလုံးမှန်!
2. configured Firewall ကို, အားလုံးမှန်!
3. configured Modem / Router, အားလုံးမှန်!
4. ငါပြည်တွင်းဖြစ်စမျးသပျ, အားလုံးမှန်!
5. ငါလိပ်စာမရှိပါ-IP ကိုဖန်တီး, အားလုံးမှန်!
6. Pingo No-IP address ကို, အားလုံးမှန်!
7. ငါအင်တာနက်ကနေတဆင့်စမ်းသပ်စစ်ဆေး, အလုပ်လုပ်မ.
8. Antivirus နှင့် Firewall ကို Desativei. ငါ site ကိုစမျးသပျ: အားလုံးမှန်! ငါပြင်ပစမျးသပျ: ဘာမြှ!
9. ငါစမ်းသပ်ဆိုက်တယောက်က FTP အွန်လိုင်းစမ်းသပ်သူကိုပြု, တွေ့, သစ်လုံး, ဒါပေမဲ့, မပြည့်စုံ, Eh ငြင်းဆန်ခဲ့သည်, နှင့်ရလဒ်ကြောင့်ခဲ့သည်:
အမှား: PASV ပြန်ကြားချက်ထဲမှာ Server ကိုပြန်လာသော unroutable ပုဂ္ဂလိက IP address ကို
ဆာဗာ passive mode ကိုဆက်သွယ်မှုများကိုခွင့်ပြုပါရန်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ.
ဆာဗာတစ်ခု NAT Router ကနောက်ကွယ်မှသည်ဆိုပါက, ဆာဗာက၎င်း၏ပြင်ပ IP address ကိုသိတော်မူ၏သေချာအောင်.
passive mode ကိုအတွက်အသုံးပြုဆိပ်ကမ်းများ၏အကွာအဝေးအားလုံးပါဝင်ပတ်သက် firewalls များဖွင့်လှစ်ရဦးမည်.
passive mode ကိုအတွက်အသုံးပြုဆိပ်ကမ်းများ၏အကွာအဝေးအားလုံးပါဝင်ပတ်သက် NAT router များသဖြင့်ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်.
အားလုံး firewalls များ uninstall လုပ်ကြိုးစားပါနှင့်သင်၏ modem သို့တိုက်ရိုက်သင်၏ကွန်ပျူတာ plug, အရှင် router ကိုကျော်လွှား.
အ FileZilla မှာ option ကိုတည်ရှိသောမဟုတ်: “အောက်ပါအိုင်ပီ em တွေမှာ Passive mode ကိုဆည်တည်းကိုသုံးပါ!” . ဗားရှင်းကိုသုံးပါ 0.9.39
ငါ Eh အ Modem / Router တစ်ခုခုက q သဘောပေါက်, စံပြဇ D-Link ကို DSL-2640T, သို့မဟုတ်ကလေလံ “တွေမှာ Passive mode ကို em ip”
အ modem ဖန်သားပြင်မှလင့်များကိုလိုက်နာပါ, အကြှနျုပျကိုကူညီပေးဖို့, အဘို့ဖြစ်၏သို့မဟုတ်အမှု:
ပုံရိပ် 01 – http://www.comarket.com.br/downloads/tela-modem-01.png
ပုံရိပ် 02 – http://www.comarket.com.br/downloads/tela-modem-02.png
သင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. နောက်တဖန်, မတော်တပို့ခကျြမြား, စမျးသပျအားလုံးရေးသားချက်များက q, ဒီအထိရောက်ဆုံးခဲ့သည်.
ငါ့နည်းနည်းပြဿနာနှင့်အတူပေါ့. ငါအစွန်အဖျားကိုစောင့်ဆိုင်းတယ်, ဖြေရှင်းနည်း…
4 အောက်တိုဘာလ 2011 သို့ 21:15
ငါတံခါးရွက်အဘို့စမ်းသပ်ပွုခဲ့ – http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/
အပေါ် scanning ဆိပ်ကမ်းများ 187.40.176.111
187.40.176.111 ဆိပ်ကမ်းအပေါ်တုံ့ပြန်ဖြစ်ပါတယ် 2100 (amiganetfs).
187.40.176.111 ဆိပ်ကမ်းအပေါ်တုံ့ပြန်မပါ 2101 (RTCM SC104).
ငါ့နည်းနည်းပြဿနာနှင့်အတူပေါ့. ငါအစွန်အဖျားကိုစောင့်ဆိုင်းတယ်, ဖြေရှင်းချက် ...
4 အောက်တိုဘာလ 2011 သို့ 21:28
Oi, ရူပ, ဒါကြောင့်ဤသုံးပါးဖြစ်နိုင်ခြေတယောက်နှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိစေခြင်းငှါ:
(1) တစျခုမှာအရေးကြီးဆုံးအရာတယောက်က FTP အသုံးပြုတဲ့ Firewall ကို TWO ဆိပ်ကမ်းများအတွက်လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်. ငါသည်တံခါးအသုံးပြု 2100 (ပညတ်တော်တို့ကိုသွားရောက်) နှင့် 2101 (ဒေတာစီးဘို့). အကယ်လို့ Firewall ကိုလွှတ်မထားဘူးဆိုရင်, ဒါဟာအလုပ်မဖြစ်မည်မဟုတ်. ထပ်ကျော့: ဒေတာဆိပ်ကမ်းလွှတ်ပေးရန် (2101) လည်း!
(2) လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အထက်ကပြောသည်အဖြစ်: Gee, ကတယ်, သာထို option တွေမှာ Passive mode ကိုဆည်တည်းအတွက်အပြီးတွင် IP ကိုအသုံးပြုပါကိုရှေးခယျြ. ယခုလိမ့်မည်!! ထိုကွောငျ့, FileZilla ၌ဤ option ကိုကြည့်ရှုပါ.
(3) ရတဲ့အခါစမ်းသပ်, သင်သည်သင်၏ကွန်ယက်ကိုပြင်တဲ့အခါမှသာ DDNS NO-အိုင်ပီကိုသုံး. ဒေသခံစမ်းသပ်ရာတွင် အကယ်., တူညီပြည်တွင်းရေးအိုင်ပီကိုသုံး. ငါအခြေအနေများမြင်ရပါတယ် (GVT) သူသည်ငါ၏ကွန်ယက်တွင်တစ်ဦးကို PC ထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေသောအခါ, DNS ကိုအလုပ်မလုပ်ပါဘူး.
6 အောက်တိုဘာလ 2011 သို့ 20:44
tutorial နှင့်အပြည့်အဝ heim လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်. မတော်တပို့ခကျြမြား!!!
ငါသည်သင်တို့၏သင်ခန်းစာနောက်တော်သို့လိုက်, ဒီအားလုံးညာဘက်ဒေသခံစမ်းသပ် …
သို့သော်ငါဆဲပြင်ပ access များအတွက်ပြဿနာများရှိသည်, ဦးငါ့ကိုအကူညီနိုင်လျှင်ဖြစ်နိုင်ချေဒါကြောင့်ငါကအသေးစိတ်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြပါမည်:
DSL modem ကို – 500B က
Obs: site ကိုစမ်းသပ်မှုတွင်, အားလုံးလက်ျာနှင့်ပြေး … သို့သော်ငါပြင်ပဝင်ရောက်ခွင့်အဘို့ဤအခက်အခဲနှင့်အတူဖြစ်ကြောင်းကို.
16 အောက်တိုဘာလ 2011 သို့ 13:43
Oi က Eduardo, ထိုစာအပိုဒ်မှနောက်သို့လိုက်ရန်ကြိုးစား… ငါအသီးအသီးပတ်ဝန်းကျင်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများဆောင်ကြဉ်းနိုင်မသိ (ပြဿနာများ), ဤကိစ္စတွင်အတွက်, ကျနော်တို့အကြောင်းရင်းရှာပါရန်လိုအပ်ပါတယ်. Firewall ကို disable လုပ်ဖို့အားဖြင့် Start (သာအဆုံးစမ်းသပ်ဖို့, Firewall ရဲ့ Configuration ပြဿနာလျှင်သင်ပြီးသားသတိပြုမိကြသည်). အပိုဒ်ကိုကြည့်ပါ! ထိုပြဿနာအတွက်ပြင်ပကနေဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ဒါမှမဟုတ် Firewall ရဲ့ Configuration အတွက်အပြစ်အနာသို့မဟုတ် routing ကိုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်, စစ်ဆေးခြင်း! ငါဖြစ်ပျက်မြင်ကြပါတယ်နောက်ထပ်အသေးစိတ်သင်သည်သင်၏ကွန်ရက်အတွင်း၌အခါတစ်ဦး bug ကိုဖြစ်ပါတယ်, သငျသညျကိုသာဒေသခံ ip သုံးပြီး access လုပ်နိုင် (ထွ: ftp://10.1.1.2:2100 သို့မဟုတ် ftp://192.168.0.2:2100… ရှင်းလင်းသော, FileZilla သောစက်ရဲ့ IP နှင့်အတူစမ်းသပ်). ဘယ်အချိန်မှာကွန်ယက်ပြင်ပမှာ, အခြားစကား, မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏အိမ်၌သို့မဟုတ်သင့်ကွန်ယက်တွင်မကနောက်ထပ်တည်နေရာမှာ, ထို့နောက်ဟုတ်ကဲ့သင်နှင့် DNS ကိုအသုံးပြုပါ (သို့မဟုတ်မှန်ကန်သည့် IP, သင်သိသည်မှန်လျှင်). ငါအပေါ် commented အဘယျသို့လည်းကြည့်ရှုပါ6အောက်တိုဘာလ 2011 သို့ 20:44 (အထက်ကြည့်ရှု). ကောင်းသောကံ!
16 အောက်တိုဘာလ 2011 သို့ 15:26
ALFEU MANSANI ကပြောပါတယ်:
20 အောက်တိုဘာလ 2011 သို့ 9:12
တေလာဟဲလို, éသို့မဟုတ်နောက်သို့လိုက်, ငါဖော်ပြခဲ့အခွင့်အရေးအဖြစ်အရာအားလုံးကိုပြု, အတွင်းပိုင်းကွန်ရက်အတွင်း၌ ACECO, ဒါပေမဲ့အချိန်အတွက်ပြင်ပကွန်ယက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့, ငါသည်ငါ့အိုင်ပီထား (ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါသည်) နှင့် box ကို loguin ပုံ, တုံ့ပြန်ချက်အောက်ပါအတိုင်းပေမယ်မှတ်တမ်းပုံပေါ်: “425 ဒေတာဆက်သွယ်မှုဖွင့်လှစ်လို့မရပါ။”
အကြှနျုပျ၏ Router D-link ကို 500B routing သည်, ဒါပေမဲ့သူ GVT ၏ဝန်ဆောင်မှုကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သောသူတယောက်ဖြစ်ပါသည်, အ modem တံတား mode မှာသောကွောငျ့.
အကြှနျုပျ၏ကင်မရာကတစ်ဦး Foscam FI8918W ဖြစ်ပါသည် (ဒါဟာအခြား network ပေါ်မှာဖြစ်ပါသည်), ငါ FTP ကိုဝင်ရောက်ဖို့ကထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားသောအခါ, ငါအောက်ပါတုံ့ပြန်ချက်ရ: “PASV mode မှာအမှား. ဆာဗာထောက်ခံမှု PASV mode ကိုသေချာစေပါကျေးဇူးပြုပြီး”
မှား ta ကဘာလဲ?
ငါအစပျိုးမှုနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေ response'll ပို. ပင်ကျေးဇူးတင်ဖြစ်တန်ဖိုးထား.
28 အောက်တိုဘာလ 2011 သို့ 9:40
Opa, ငါဆိုသည်အဖြစ်, တယောက်က FTP နှစ်ခုဆိပ်ကမ်းများကိုအသုံးပြုသည်: တစ်ဦးကဆိပ်ကမ်း 21 နှင့် 20. ပထမဦးဆုံးအပညတ်တော်နှင့်ဒုတိယအသွားအလာ, ဒေတာ. အချို့သောအော်ပရေတာအတွက်သော့ခတ်ခံရဖို့မ, ကျွန်တော်မှအဲဒီ ports ကိုပြောင်းလဲ 2100 အီး 2101, လိုအပ်သလို. သငျသညျကပြောပါတယ်အဆိုပါအမှား, ဒါဟာဒေတာမှ connection ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့မဟုတ်ပါဘူး (2101). ထိုအခါ, ဒါကြောင့် Firewall ကိုပုံရသည်… အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်အပိုဒ်ပြုပါရန်ကြိုးစား. ယနေ့ငါဝင်းနှင့်အတူစက်တခုတခုအပေါ်မှာတယောက်က FTP ကို ​​set up 7, အင်တာနက်ကို GVT လက်ခံရရှိခြင်းနှင့်မကြာမီ5အလုပ်မိနစ် (ချဲ့ကားခြင်းမရှိဘဲ). ကင်မရာကိုအသုံးမပြုမီနှင့်ထိုကဲ့သို့သော, သမရိုးကျလမ်းလုပ်ကိုင်ရန်ကြိုးပမ်း (ဘရောက်ဇာသို့မဟုတ် Windows Explorer ကို). passive mode ကိုအကွောငျး, ငါ passive mode မှာဆက်သွယ်မှုအကြောင်းပြောဆိုဘယ်မှာရှိမြင်, သောကိန်းဂဏန်းရှိပါတယ် “passive mode ကို settings ကို”. ငါသည်သင်တို့ကိုအမြဲတမ်းပိတ်ထား antivirus ကိုနဲ့ firewall ကိုစမ်းသပ်ကြပါရန်အကြံပေး, ကိုယ့်ဒါ, မည်သည့်ပိတ်ဆို့ရှိလြှငျ, သငျသညျထိုပြဿနာကိုဖော်ထုတ်ပြီးဖြေရှင်းနိုင်ရန်ရှိသည်. ဒီနေရာမှာငါ firewall ကို enabled ကိုသုံး (ထိုတယောက်က FTP ဆိပ်ကမ်းကြောင့်ခြွင်းချက်နှင့်အတူ) နှင့် Kaspersky antivirus ကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်. ကောင်းသောကံ!
31 အောက်တိုဘာလ 2011 သို့ 17:41
တေလာဟဲလို, ငါက Windows ခုနစ်ပါးကို အသုံးပြု. တာပါငါတူညီတဲ့ပြဿနာရှိခြင်းတာပါ. ယခုပင်လျှင်ငါကို disable လုပ်ထားတဲ့ Firewall ကိုနှင့် antivirus ကိုအတူစမ်းသပ်ပြီးပေမယ်ရလဒ်များကိုရတဲ့မဟုတ်. ဒါဟာတယောက်က FTP account များကိုချိတ်ဆက်အပေါင်းတို့နှင့်ပေမယ် passivated သည်နှင့်ဤအမှားပြီးနောက် 425. ငါအဖြေကိုမျှော်လင့်ပါတယ်. ပှေ့ဖကျ
23 ဇန္နဝါရီလ 2012 သို့ 0:28
Oi Petrus, သငျသညျဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအတိအကျအတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်ပါတယ်. အဘို့ဖြစ်၏သို့မဟုတ်အမှု, သငျသညျကိုပြု၏အရာအားလုံး undo, နှင့်ခြစ်ရာကနေစတင်, ခြေလှမ်းများကခြေလှမ်း. သငျသညျအပိုဒ်သောများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက်တစ်ခုခုကိုပြောင်းလဲယခုအချိန်တွင် မှစ., ထို့နောက်အလုပ်မများ၏အန္တရာယ်ယူဆ. ငါသည်ဤသို့ဆို, ငါ FileZilla install လုပ်ပြီးပြီ + အနိုင်ရ7တွင် 8 ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများအတွက်စက်တွေကို, မင်္ဂလာပါနှင့် GVT ၏အော်ပရေတာနှင့်အတူ, မည်သည့်အခက်အခဲမရှိဘဲ. ငါအသီးအသီးအမှုကွဲပြားခြားနားသည်ကိုငါတို့သိကြ၏, ဒါပေမဲ့ဒီအဘို့အထွက်ကိုစောင့်ကြည့်! ကိုယ့်အရာသုံးခုသင်သတိပေးပါလိမ့်မယ်:
(1) တစ်ဦး Tela configure မရှိ menu ကို FileZilla ပါဘူး “passive Mode ကိုချိန်ညှိ”, ဒါဟာအပိုဒ်အတွက်ညီမျှသည် ( http://taylorlopes.com/wp-content/uploads/2010/10/fz11.png ).
(2) အဆိုပါအော်ပရေတာ GVT, ငါအတွက်ပြင်ပကနေ ftp ကိုရယူပြဿနာတွေခဲ့ကြ, အ FTP ကို ​​install လုပ်ပြီးသောကွန်ယက်တွင်ဖြစ်ခြင်း. ရှင်းပြ, အခါ, FTP ကိုပြေးသောတူညီရှိနေရင် LAN ပေါ်မှ, သင့်ရဲ့ server ကို၏အအေး ip ကိုသုံး, အရာတစ်ခုခုနဲ့တူ 192.168.0.21, ထိုသို့ချိတ်ဆက်ရန်; DDNS ကိုမသုံးကြဘူး (dyndns သို့မဟုတ်လုံးဝမ-ip)! သင်တို့မူကားထွက်ကြသောအခါ, မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏အိမ်၌သို့မဟုတ်အင်တာနက်ကဖေးမှာ, ထို့နောက်ဟုတ်ကဲ့ DDNS ကိုသုံး.
(3) ထိုတယောက်က FTP ဝန်ဆောင်မှုလည်ပတ်သင့်ကွန်ပျူတာသို့ သွား. တစ်ဦး fixed အိုင်ပီဖို့ကွန်ယက်အဒက် configure, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် 192.168.1.21. ဤ IP FTP ဆာဗာ fixed ရပါမည်သတိပြုပါ, ဒါကြောင့်သင် redirect ဖို့သင့် router ကပြောပြနိုင်. fixed အကယ်. မ, နောက်ဆုံးမှာကြောင်းကိုသင်၏ router ကို၏ DHCP IP ကိုတာဝန်ပေးအပ်နှင့် redirect configuration ကိုနောက်တဖန်မသင်တို့၏ FTP ဆာဗာမှညွှန်ပြပါလိမ့်မည်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဖြစ်ပျက်စေခြင်းငှါ
သင့်ရဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနည်းသင်ရှာလိုလျှင်, ဤနေရာတွင်မှတ်ချက်ပေးရန်ကျေးဇူးပြုပြီး, အခြားသူများကိုသတိပြုမိဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်, falouuu…
23 ဇန္နဝါရီလ 2012 သို့ 7:52
တေလာဟဲလို, ငါကထပ်မံဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်. ဒါပေမယ့် PC နဲ့ Windows ကို reeinstalar ကို format လိမ့်မည်မီက. မဒါ, ဒါပေမယ့်နှစ်ရက်အတွက်ဒီကို PC နှင့်အတူငါရှိဒုတိယပြဿနာဖြစ်ပါသည်, တဦးတည်း tava ပင်မှန်ကန်သော password ကိုအတူ modem နှင့်ချိတ်ဆက်မ firefox နှင့်အတူရှိ၏. သင်တို့သည်ဤ besteirinhas ပေးခြင်းစတင်သောအခါအဒါကြောင့်ပြတင်းပေါက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်စေ '' ဖြစ်ပါတယ် frescando. အဖြစ်မကြာမီငါပြဿနာဖြေရှင်းဖို့အဖြစ်, ငါကဒီမှာ post. အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
23 ဇန္နဝါရီလ 2012 သို့ 9:42
ငါ PC ကွန်ပျူတာကို format, ဒါကြောင့်လည်းမရှိနဲ့အမှားပေးခြင်းဆက်ပြီး install လုပ်ပြီးအရာအားလုံးကိုအတိအကျလမ်း 425 အ FTP ကိုပြင်ပမှဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အခါ…
26 ဇန္နဝါရီလ 2012 သို့ 4:37
google ကနေတစ်ဆင့် access ကိုကပုံပေါ် Chrome ကိုလာတဲ့အခါ:
(000009)26/01/2012 04:37:29 – (အတွက် logged မဟုတ်) (177.40.224.216)> ချိတ်ဆက်ထားပြီး, ကြိုဆိုသတင်းစကားပေးပို့ခြင်း…
(000009)26/01/2012 04:37:29 – (အတွက် logged မဟုတ်) (177.40.224.216)> 220-FileZilla Server ကိုဗားရှင်း 0.9.40 beta ကို
(000009)26/01/2012 04:37:29 – (အတွက် logged မဟုတ်) (177.40.224.216)> 220-တိ Kosse ကရေးသား (Tim.Kosse@gmx.de)
(000009)26/01/2012 04:37:29 – (အတွက် logged မဟုတ်) (177.40.224.216)> 220 သွားရောက်ကြည့်ရှုပေးပါ http://sourceforge.net/projects/filezilla/
(000009)26/01/2012 04:37:29 – (အတွက် logged မဟုတ်) (177.40.224.216)> USER မှ admin ရဲ့
(000009)26/01/2012 04:37:29 – (အတွက် logged မဟုတ်) (177.40.224.216)> 331 admin ရဲ့အဘို့လိုအပ်တဲ့စကားဝှက်
(000009)26/01/2012 04:37:29 – (အတွက် logged မဟုတ်) (177.40.224.216)> PASS တ **********
(000009)26/01/2012 04:37:29 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> 230 အပေါ် logged
(000009)26/01/2012 04:37:29 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> SYST
(000009)26/01/2012 04:37:29 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> 215 UNIX တွင် FileZilla အားဖြင့်အတုယူ
(000009)26/01/2012 04:37:29 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> PWD
(000009)26/01/2012 04:37:29 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> 257 “/” လက်ရှိ Directory ဖြစ်ပါတယ်.
(000009)26/01/2012 04:37:29 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> TYPE ငါ
(000009)26/01/2012 04:37:29 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> 200 ငါသတ်မှတ်ထားခြင်းပုံစံ
(000009)26/01/2012 04:37:29 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> EPS
(000009)26/01/2012 04:37:29 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> 229 ထည့်သွင်းခြင်းတိုးချဲ့တွေမှာ Passive Mode ကို (|||2101|)
(000009)26/01/2012 04:37:50 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> PASV
(000009)26/01/2012 04:37:50 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> 227 တွေမှာ Passive Mode ကိုထည့်သွင်းခြင်း (192,168,1,2,8,53)
(000009)26/01/2012 04:38:11 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> လုံးလုံး
(000009)26/01/2012 04:38:11 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> 221 သွားတော့မယ်
(000009)26/01/2012 04:38:11 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> အဆက်ပြတ်.
FiliZilla လိုင်းကနေတစ်ဆင့် access ကိုပုံလိုက်တဲ့အခါ:
(000011)26/01/2012 04:39:30 – (အတွက် logged မဟုတ်) (177.40.224.216)> ချိတ်ဆက်ထားပြီး, ကြိုဆိုသတင်းစကားပေးပို့ခြင်း…
(000011)26/01/2012 04:39:30 – (အတွက် logged မဟုတ်) (177.40.224.216)> 220-FileZilla Server ကိုဗားရှင်း 0.9.40 beta ကို
(000011)26/01/2012 04:39:30 – (အတွက် logged မဟုတ်) (177.40.224.216)> 220-တိ Kosse ကရေးသား (Tim.Kosse@gmx.de)
(000011)26/01/2012 04:39:30 – (အတွက် logged မဟုတ်) (177.40.224.216)> 220 သွားရောက်ကြည့်ရှုပေးပါ http://sourceforge.net/projects/filezilla/
(000011)26/01/2012 04:39:30 – (အတွက် logged မဟုတ်) (177.40.224.216)> USER မှ admin ရဲ့
(000011)26/01/2012 04:39:30 – (အတွက် logged မဟုတ်) (177.40.224.216)> 331 admin ရဲ့အဘို့လိုအပ်တဲ့စကားဝှက်
(000011)26/01/2012 04:39:30 – (အတွက် logged မဟုတ်) (177.40.224.216)> PASS တ **********
(000011)26/01/2012 04:39:30 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> 230 အပေါ် logged
(000011)26/01/2012 04:39:30 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> PWD
(000011)26/01/2012 04:39:30 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> 257 “/” လက်ရှိ Directory ဖြစ်ပါတယ်.
(000011)26/01/2012 04:39:30 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> TYPE ငါ
(000011)26/01/2012 04:39:30 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> 200 ငါသတ်မှတ်ထားခြင်းပုံစံ
(000011)26/01/2012 04:39:30 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> PASV
(000011)26/01/2012 04:39:30 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> 227 တွေမှာ Passive Mode ကိုထည့်သွင်းခြင်း (192,168,1,2,8,53)
(000011)26/01/2012 04:39:30 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> MLSD
(000011)26/01/2012 04:39:41 – admin ရဲ့ (177.40.224.216)> 425 ဒေတာဆက်သွယ်မှုဖွင့်လှစ်မနိုင်.
ယခုပင်လျှင်ငါ Avira နဲ့ firewall ပယ်နှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီး.
26 ဇန္နဝါရီလ 2012 သို့ 4:40
သာတိုက်ရိုက်ဆိပ်ကမ်းပျောက်ဆုံး tava 2101 အ modem ပေါ်မှာငါ့ပြည်တွင်းရေး IP ကိုမှ.
တစ်ခုတည်းသောညွှန်ကြားခဲ့ 2100 ထိုသင်ခန်းစာတွင်ဖော်ပြထားအဖြစ်.
26 ဇန္နဝါရီလ 2012 သို့ 5:23
က Igor ကပြောပါတယ်:
တေလာ Lopes, ထိုသင်ခန်းစာအတွက်ကျေးဇူးတင်, အရာအားလုံးကဒီမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့.
13 မတ်လ 2012 သို့ 15:53
အောက်ပါ…လူအပေါင်းတို့သည်သင်ခန်းစာ CesarFTP ကိုပြု, ဒါပေမယ့်ပင်ဝင်ရောက်ခွင့်သို့မဟုတ်ရဲ့ login တောင်းဆိုမှုများအတွက်ပြင်ပမှာအခါ, ငါ DynDNS ဖွငျ့…ငါကြိုးမဲ့ router ကို TP-Link ကို TD certinho တံခါးရွက်ထား 21, 2100 အီး 2101…ဒါပေမဲ့မမျှော်လင့်, ငါက Windows Firewall နဲ့ဘာမှမအတွက်ခြွင်းချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများထား…သို့မဟုတ် Eh က Windows Server ကိုစနစ် 2008 R2…ငါဘာလုပျသငျ့, ငါသည်ငါ၏အမှုကို Windows Server ကိုဖြစ်မတူညီတဲ့ဖြစ်စေခြင်းငှါထင်သောကွောငျ့သငျသညျရှေ့ဦးစွာ မှစ. အကြှနျုပျကိုတူးနိုင်လျှင် 2008 နှင့်အချို့သောအခြား configuration ကိုပျောက်ဆုံးလိမ့်မည်…ကောင်းသော, အကြှနျုပျကိုကူညီ!
31 အောက်တိုဘာလ 2011 သို့ 16:52
Opa, ဆှဲငငျ, သငျသညျဆိုပိုင်ထိုက်သောရှိပါကက Windows Server ကိုငါမပြောနိုင်. ငါသည်ဤ S.O. ရှိသည်မဟုတ်. ငါသည်ယနေ့ Win7 နှင့်အတူတစ် machine ပေါ်တွင် FTP ကို ​​install လုပ်ခဲ့ရသည်ကွောငျးသိရ + အော်ပရေတာ GVT နှင့်ဿုံအလုပ်လုပ်ခဲ့, ဒါဟာမယူခဲ့ပါ5configure လုပ်ဖို့မိနစ်. ငါသည်ဤအကြွေး… မိနျ့တျောမူ၏, ပွေ့ဖက်!
31 အောက်တိုဘာလ 2011 သို့ 17:47
Type အမျိုးအစားသို့မဟုတ် Windows7ဒါဟာဆာဗာအဖြစ်တာအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် 2008, သို့သော်အချို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရွေးချယ်စရာများပြောင်းလဲ, သေး qlqr အသေးစိတ်ခြားနားချက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါမပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအတွက်ဖတ်သောအရာကိုမှ TBM cmo Router ကအလုပ်လုပ် modem က q ဖြစ်စေခြင်းငှါ,, သူ့ကိုငါထားမည်, နှင့်ဖြစ်ကောင်းဖြေရှင်းပေး, အ modem တယ်လီဖုန်းက q tbm Eh Router က…ငါက q Eh တစ်ခုတည်းသောရုံးတင်စစ်ဆေးရရှိနိုင် rs ထင်
1 နိုဝင်ဘာလ 2011 သို့ 23:28
ပဌမ, သင်၌ပြင်ပကိုစမ်းသပ်ဖို့ရှိသည် (အင်တာနက် -> LAN) ထိုတယောက်က FTP ဆိပ်ကမ်းများဖွင့်လှစ်ပါက. ဒီ site ကိုရိုက်ထည့် http://www.t1shopper.com/tools/port-scan/ နှင့်အခန်းတံခါးပါစေ (2100 အီး 2101, သို့မဟုတ်သင်ခန့်ထားပြီတ). ထိုဆိပ်ကမ်းများဖွင့်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, အပိုဒ်ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းထို့နောက်အဘယ်ကြောင့်သင့် router configured မသည် (NAT) သို့မဟုတ်သင့် network ကိုနှစ်ဦး router များကြောင့်. အဆုံးစွန်သောအမှု၌, သငျသညျတံတား mode မှာအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပထမဦးဆုံး router ကိုသွင်းထားသင့်ပါတယ် (ပိုတငျး), ဖြောင့်ဒုတိယ router ကိုမှစီးဆင်းသွား. ထိုပြဿနာကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ… falouuu!
2 နိုဝင်ဘာလ 2011 သို့ 9:19
ဒါဟာကွန်ယက်သိရသည်င်2router များ, အွမ် TP-LINK ကြိုးမဲ့အီးဏ modem သည် router da Telefonica…ငါဆက်လက်ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်ဘယ်လိုဤကိစ္စတွင်အတွက်, နှစ်ခုတံခါးတို့ကိုလွှတ်ပေးရန်ဖို့ Virtual Server ကိုထူထောင်ကတည်းက 21, 2100 အီး 2101?
3 နိုဝင်ဘာလ 2011 သို့ 8:12
တေလာ, ငါသည်သင်တို့ကိုမေးမြန်းမယ်လို့…စင်တီမီတာ ip ta ဏ modem 192.168.1.1 နှင့်ကြိုးမဲ့ router ကို 192.168.0.1 ဒါကွန်ပျူတာဘူတာရုံက MSM သည် subnet ကြိုးမဲ့ router ကို…ဒီ subnet 192.168.1.x အပေါ် modem ကိုသြဇာလွှမ်းမိုး?
8 နိုဝင်ဘာလ 2011 သို့ 12:31
Oi Levy, အဘယ်သူမျှမသြဇာလွှမ်းမိုးမှု… ထိုမှတပါး, ကအလုပ်လုပ်တယ်အဖြစ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ဥပမာအား:
Router က function ကိုဖွင့်နှစ်ခုကိုမတူညီတဲ့ကွန်ရက်များနှင့်ချိတ်ဆက်နေသည်… သို့သော်, ငါ router ကအင်တာနက်အပေါ်မှန်ကန်သည့် IP ခံယူဖို့အကြံပြုလိုပါတယ် (နှင့်မအေးအိုင်ပီ, ဥပမာ၌ရှိသကဲ့သို့). ထိုကွောငျ့, ဒီလိုလုပ်ဖို့, တံတား mode ကိုအတွက် MODEM ကိုအသုံးပြုပြီးထားခဲ့ဖို့အကောင်းဆုံး (ပိုတငျး), ဒါတစ်ခုလုံးကိုစီးဆင်းမှုကြောင့် Router ကိုတိုက်ရိုက်ရှုံးသည်အထဲသို့ဝင်သောကြောင့်, ကစစ်မှန်ကြောင်းသက်သေပြမှပင်ဖြတ်သွားသည် (PPPOE) သင်၏ Internet ပံ့ပိုးပေးသူမှ.
5 ဇန္နဝါရီလ 2012 သို့ 11:09
ထိုအခါ, အလုပ်ပြင်ပမှာ, ဒါပေမဲ့သာ Firefox အတွက်, ငါအရေးပါအဘယျသို့ဖွစျသညျကိုက Internet Explorer များအတွက် FTP ကို ​​access မနိုင်, client များသာ IE ကိုကိုသုံးအဖြစ် = /…သငျသညျငါ IE ကိုအတွက် FileZilla တယောက်က FTP Server ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုသိ?
23 ဇန္နဝါရီလ 2012 သို့ 10:24
IE ကိုအားဖြင့် FTP ကိုကြည့်ရှုခြင်းဒုက္ခရှိကွောငျးသတိမထားမိ… ထိုမှတပါး, ကိုယ့်ကဒီမှာ IE ကိုအတွက်စမ်းသပ်ရန်နှင့်အေးမြပြေး. ခေါ်ဆိုမှုတယောက်က FTP protocol ကို အသုံးပြု. လုပ်ရဦးမည်:// (မဟုတ် http://), အရာတစ်ခုခုနဲ့တူ ftp://192.168.0.21:2100, ဘယ်မှာ 192.168.0.21 သင့်ရဲ့ FTP ဆာဗာ၏ IP ဖြစ်ပါတယ် (FileZilla) အီး 2100 ဒါဟာသင်တယောက်က FTP ဆက်သွယ်မှုများကိုစောင့် FileZilla ကို set up သော port ဖြစ်ပါတယ်. ယထာဘူတကျသော, ဤ IP ဥပမာအားသာသင့်ရဲ့ internal network ကိုအပေါ်အလုပ်ဖြစ်တယ်… အင်တာနက်အသုံးပြုဖို့ DDNS ဖန်တီးရမယ်, အပိုဒ်တွင်ဖော်ပြထားအဖြစ်.
27 ဇန္နဝါရီလ 2012 သို့ 22:22
Fabio Dias ကပြောပါတယ်:
ကောင်းသောနေ့လည်ခင်း, ငါကြီးမြတ်သင်ခန်းစာဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်, အနည်းဆုံးအားဤနေရာတွင်အကြှနျုပျ၏ Router ထဲတွင်တစ်ဦး Dlink DIR300 သောသတိပြု, အ “ကြမ်းပိုး” ငါ့ကို ip စာအုပ်ဆိုင်မသွားပါစေလိမ့်မယ်, ဟောင်း: 192.168.1.140 ငါ၏အ server ကိုဖြစ်, DHCP IP ကိုငါ့အ wifi မှအပ်ပေးစေ, ငါသည် router အတွင်း Router ကိုငါ့ပြန်ညွှန်းပေးတော်မူပြီသော ip ထား (ဆိပ်ကမ်း foward) နှင့်အဆင်သင့်, ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်, ထိုသို့လက်စွဲမိတျဆှေအတွက်ကပြောပါတယ်တူငါအရာအားလုံးကိုပြု, နှင့်ငါ့ DIR300 အတွက်ရှိကြောင်းဒီရှုပ်ထွေးထဲက, လှပသောရှင်းပြီ. နောက်တဖန်ကျေးဇူးတင်စကား.
30 နိုဝင်ဘာလ 2011 သို့ 19:50
Oi, တိကျတဲ့တီးဝိုင်းအတွက် IP ကို ​​assign မှ DHCP configured Router ကပါစေ, ဥပမာ, အဖြစ် 192.168.1.100 တစ်ဦး 192.168.0.200. ထိုအခါတယောက်က FTP ဝန်ဆောင်မှုလည်ပတ်သင့်ကွန်ပျူတာသို့သွားနှင့်တစ်ဦး fixed အိုင်ပီဖို့ကွန်ယက်အဒက် configure, ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ် 192.168.1.21. ဤ IP FTP ဆာဗာ fixed ရပါမည်သတိပြုပါ, ဒါကြောင့်သင် redirect ဖို့သင့် router ကပြောပြနိုင်. fixed အကယ်. မ, နောက်ဆုံးမှာကြောင်းကိုသင်၏ router ကို၏ DHCP IP ကိုတာဝန်ပေးအပ်နှင့် redirect configuration ကိုနောက်တဖန်မသင်တို့၏ FTP ဆာဗာမှညွှန်ပြပါလိမ့်မည်ကိုပြောင်းလဲလိမ့်မည်ဖြစ်ပျက်စေခြင်းငှါ. Falouuu…
5 ဇန္နဝါရီလ 2012 သို့ 11:29
သို့သော်ထို router ကို၏ဤအပိုငျးကိုတကယ်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်?? သင်သည်အခြားပြည်နယ်ကနေဥပမာအားအဘို့ဤ access ကိုလုပ်မယ့် Router ကရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်?? ငါ့ modem အိမ်မှာ Aki နှင့်ဒေသခံ access ကိုဿုံအလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါအိမ်ပြန်မဟုတ်သော funfa မိတ်ဆွေများကြိုးစားသောအခါထို modem ပင်တရားဝင်အ IP ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော့် PC ကိုပိတ်ဘယ်တော့မှကြောင့်ပိုက်ကွန်ကို, ငါ့ IP ကိုမပြောင်းပါဘူး, အများကြီးလျော့နည်း! ကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ကနေတဆင့်စကားပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်တကယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သော access ကိုလိုအပ်ကြောင်း.
5 ဇန္နဝါရီလ 2012 သို့ 10:48
17 ဇန္နဝါရီလ 2012 သို့ 8:18
ဒါဟာမူတည်… သင်သာတစ်စက်ရှိပါက, ကိုယ့်ဖြောင့်သင့်ရဲ့ ADSL MODEM ကိုအသုံးပြုပြီးဖို့က plug, သငျသညျ router ကိုမလိုအပ်ပါဘူး. အဆိုပါအရေးကြီးသောအရာတယောက်က FTP server ကိုပြေးသောသင်၏ကွန်ပျူတာမှန်ကန်သည့် IP ကိုလက်ခံရရှိလျှင်မြင်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ်. သင်သည်သင်၏စက်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်မှန်ကန်သည့် IP ကိုအသုံးပြုပြီး FTP မှဖုန်းခေါ်ရမယ် (DynDNS သို့မဟုတ် No-IP ကိုဖန်တီးသို့မဟုတ်နာမတော်ကိုအမှီ ပြု.), သတင်းပို့သို့မဟုတ် protocol ကို (ftp နှင့်မကို http) နှင့်တံခါး (21 သို့မဟုတ် 2100) သငျသညျနားမထောငျဖို့သင့် FTP ဆာဗာသတ်မှတ်ထား. ထိုအရပ်မှ, browser ကိုနှင့်အမျိုးအစားအကြား ftp://seuUsuario@seuIPValido:suaPortaFTP, နမူနာ: ftp://admin@189.75.34.242:2100
5 ဇန္နဝါရီလ 2012 သို့ 11:38
မားကို့စ Reis ကပြောပါတယ်:
သင် FTP ဆာဗာပေါ်မှာဤဖိုင်တွဲကိုဖွင့်လှစ်သောအခါအမှားဦးဖိုလ်ဒါထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့တစ်ဦးကလိုင်စင်ရှိသည်သောသေချာအောင်
421 t ကို socket ဖန်တီး cant
27 ဇန္နဝါရီလ 2012 သို့ 0:15
တစ်ဦး Tela configure "တွေမှာ Passive Mode ကို Settings" ကိုအဘယ်သူမျှမမီနူး FileZilla ပါဘူး, ဒါဟာအပိုဒ်အတွက်ညီမျှသည် ( http://taylorlopes.com/wp-content/uploads/2010/10/fz11.png ). တံခါးရွက် 2100 အီး 2101 သူတို့ဟာ firewall ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ရပါမည်. နောက်ဆုံး, ဒါကြောင့်ပိတ်ဆို့ကြောင်းဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကိုမဖွင့်လျှင်မြင်ရ (သေချာစေရန်ယာယီက disable). ပြည်တွင်းဖြစ်အတယောက်က FTP function ကို Make (ftp://127.0.0.1:2100), သာထို့နောက် DDNS သုံးပြီးအင်တာနက်ကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့် Router ကိုအပေါ်ဆိပ်ကမ်းများ၏မှန်ကန်သော redirection အောင် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်. Falouuu!
27 ဇန္နဝါရီလ 2012 သို့ 23:06
ဒီယေဂို Camargo ကပြောပါတယ်:
တေလာ, ဆင်ခြေဆင်လက်ဒီကောင်လေးအပေါ်အပြင်းအထန်တောင်းဆို, ဒါဟာသင့်ရဲ့သင်ခန်းစာသည်ကြီးမြတ်ကြောင်း, ငါကဒီမှာကြောင်းသေချာပါတယ်:
“Oi, ဒီတံခါးကိုသင့်ရဲ့ modem / Router ကမှပွင့်လင်းကြောင်းဆိုလိုသည်, ဒါပေမယ့် "ရဲ့ Virtual Server ကိုက" အတည်ပြုရမည် (NAT) သငျသညျ FileZilla Server ကိုတပ်ဆင်ထားသည်အဘယ်မှာရှိကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့ IP ဖို့ညွှန်ကြားနေကြပါတယ်. ပြင်ပကနေဆက်သွယ်သောအခါငါပြဿနာများနှင့်အတူအချို့သောလူမြင်ကြပြီ (အင်တာနက်ကို) အတွင်းအပြင်များအတွက် (LAN), နှစ်ကြိမ်လမ်းကြောင်းမသိဘဲ ... အချို့ modems လည်း router များဖြစ်ကြောင်းစျသောကွောငျ့, ထိုအရပ်မှ, ဤကိစ္စတွင်အတွက်, တိကျသောအစုသို့မဟုတ်နှစ်ခုစလုံး NAT, အခြားစကား, modem ADSL ပြုပါ (ထို့ပြင် router ကိုရာဖြစ်ပါသည်) နှင့် Router က (ပုံမှန်အားဖြင့်ကြိုးမဲ့).”
ဒါဟာငါ့ကိုရှုပ်ထွေးသည်အဘယ်သို့သောအ, အွမ် modem Sagemcom က F @ st Router uso 1704 (GVT), ဒါပေမဲ့ဒုတိယအစိတ်အပိုင်းဖြေရှင်းပေးနိုင်ဘူး, သင့်ရဲ့စာဖတ်သူတွေမဆိုဒီ modem နှင့်အတူ messed နှင့်ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်မှစီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်?
27 ဇန္နဝါရီလ 2012 သို့ 20:04
အောက်ပါ, ဤသုံးသပ်ချက်ကိုနှစ်ခုသာ router သောသူသတိပေးသည်. အကယ်. မသင့်အမှု, လျစ်လျူရှု! အများအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ဦး ADSL modem နှင့်ကြိုးမဲ့ router ကိုရှိ; ဒါကြောင့်ကောင်းသော. အ ADSL Modem ကို router ကိုလည်း function ကိုရှိပါတယ်လျှင်ထိုပြဿနာကိုဖြစ်ပေါ်. ထိုကွောငျ့, လမ်းကြောင်း Dua ကြိမ်မှရှောင်ရှားရန်, အ control panel ကိုအကြား, အရာတစ်ခုခုနဲ့တူ http://192.168.1.1 (admin ရဲ့, gvt12345) နှင့်တံတား mode မှာလည်ပတ်ဖို့ modem ကို configure (ပိုတငျး). သို့သော်ဤ GVT နှင့်သင်၏ဆက်သွယ်မှု undo နှင့်ဖြစ်ကောင်းကြိုးမဲ့ modem / Router ကို crash လိမ့်မည်ဟုသတိပြုမိဖြစ် (သငျသညျရှိပါက). ထိုအရပ်မှ, အ modem နည်းတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် “ပိုတငျး” (နှင့်မျှမတို့ Router က), သင့် router သည်အမှန်ကန်သည့် IP နှင့်အတူအင်တာနက်ကို signal ကိုအပေါ်ဖြတ်သန်း. သင်သည်သင်၏ router သည် GVT မှ connection ကိုထူထောင်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာရပါလိမ့်မယ်, အ modem ဒီမလုပျအဖြစ်. ဥပမာအား, ငါ၏အ DLink Router ကိုငါ Setup ကို> အင်တာနက်ကို> အင်တာနက်ကော်နက်ရှင်လက်စွဲစာအုပ် Options ကို> အင်တာနက်ကော်နက်ရှင်အမျိုးအစား> ကျနော့်အင်တာနက်ကော်နက်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်အတွက် modem ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသော connection ကိုထူထောင် : PPPoE (အသုံးပြုသူစကားဝှက်). သင့်ရဲ့အမှု၌, ငါမပြောနိုင်. အင်တာနက်မပါဘဲတက်အဆုံးသတ်ဖို့မသတိထားပါ…
27 ဇန္နဝါရီလ 2012 သို့ 22:55
Petrus Henrique ကပြောပါတယ်:
ငါလက်ျာဘက်အရာအားလုံးလုပျနိုငျ, အခြားပို့စ်တွင်အကြောင်းကြားအဖြစ်. သို့သော်လည်းငါသည်ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်, ငါသည်ငါ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်အကြှနျုပျ၏ network ပေါ်မှာသောကွန်ပျူတာရယူသည့်အခါ, ငါ၏အပြင်ပ IP ကိုနှင့်အတူ, ပင်မျှမ-ip နှင့်အတူ, အားလုံးလက်ျာ၏! သို့သော်လည်းငါသည်တုံ့ပြန်ရန်အကြှနျုပျ၏ကွန်ပျူတာနှေးကွေးအခြားကွန်ပျူတာကို access နှင့်တစ်ခါတစ်ရံအချိန်ကန့်သတ်ဆက်သွယ်မှုပေါက်အောင်ထုတ်အလုပ်လုပ်ရသောအခါ. တစ်ဦးကို download လုပ်နေကြစဉ်ငါပြုသမျှ, နှင့် donwload မှအလေးထား, ထိုအခါမူကားငါမပွုခဲ့နှင့်အတူတူပင်ဆက်လက်. သငျသညျဖွစျစနေိုဘယျအရာမဆိုစိတ်ကူးရှိပါသလား?
28 ဇန္နဝါရီလ 2012 သို့ 1:27
ဤဆောင်းပါး၌, ငါ passive mode ကိုဆိပ်ကမ်းအကွာအဝေးအတွက် configuration ကိုသာဖြစ်ခြင်းကိုဖန်ဆင်း 2101 (ဒေတာ); ဒီတမင်ခဲ့, ထိုသို့ရှင်းလင်းချက်များနှင့် Router က configuration ကိုနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် (redirection) အီး firewall ကိုပြုပါ (လွှတ်ခြင်း). သို့သော်, မျိုးစုံကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းချိတ်ဆက်မှုများကို၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, သငျသညျကို passive mode ကိုရဲ့ဒီဆိပ်ကမ်းကိုအကွာအဝေးတိုးချဲ့ဖို့လိုအပ်နိုင်ပါသည်, အချို့သောမျိုးကို 2101-2301. ရှင်းလင်းသော, သငျသညျအဲဒီ ports ကို reset ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်, တယောက်က FTP အပြင် (FileZilla), ထို့ပြင် router ကိုနဲ့ firewall အပေါ်.
တစ်ဦးက passive ဆက်သွယ်မှု, client ကိုလွှဲပြောင်းတောင်းဆိုမှုစေသည်သောအခါ, (တယောက်က FTP), သို့မဟုတ် server ကို, ကစောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိသည် (liabilities) ဆက်သွယ်မှုများကို, ဒေတာဖလှယ်ကြလိမ့်မည်ဆိပ်ကမ်းမှ client ကိုကိုပြောတယ်အဘယ်သူသည်. တိုင်းအသစ်တောင်းဆိုချက်, ဆာဗာချက်ချင်းအထက်ဆိပ်ကမ်းကိုအသုံးပြုပြီး Client ကိုချိတ်ဆက်ပြီး, အဘယ်ကြောင့် data ကိုဆိပ်ကမ်း၏အကွာအဝေးကိုတိုးမြှင့်သင့်တယ်, တစ်ပြိုင်နက်တည်းဆက်သွယ်မှုများကိုခွင့်ပြုပါရန်ရှိမရှိ.
ဒီတစ်ခါလည်းသင့်ရဲ့ပြဿနာစောင့်ဆိုင်းနှင့်အချိန်ကုန်သွားပြီအတိအကျကိုဒေတာဆိပ်ကမ်းဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည် 2101 ထူးခြားတဲ့ဖြစ်, အဆက်ဆက်ဆက်သွယ်မှုများကိုတစ်ဦးကလေးကိုရှိကွောငျးဒါ, အသုံးပြုနေစဉ်တွင်ဆိပ်ကမ်းဖောက်သည်များအတွက် reserved ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းက.
ထိုကွောငျ့, Ali မရှိ FileZilla onde estáဏ intervalo "တွေမှာ Passive Mode ကို Settings" ကို ( http://taylorlopes.com/wp-content/uploads/2010/10/fz11.png ) အဘို့သတ်မှတ် 2101-2101, တူတစ်ခုခုပြောင်းလဲ 2101-2301. ဤကိစ္စတွင်သင်တစ်ဦးအကွာအဝေး / အကွာအဝေးရှိသည်လိမ့်မယ် 200 ဒေတာလဲလှယ်များအတွက်ဆိပ်ကမ်းများ. ဒါပေမယ့်လည်း Router ကိုနဲ့ firewall အကွာအဝေးအကြောင်းကြားဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး!
28 ဇန္နဝါရီလ 2012 သို့ 8:55
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တေလာ, ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်! ငါတော်တော်များများသောအရပ်နှင့် certinho ရဲ့တက်စမျးသပျ. သင့်ရဲ့ Blog ကိုမှတ်ချက်ဖြစ်ပါသည် 10!
28 ဇန္နဝါရီလ 2012 သို့ 23:59
Maciel Lopes ကပြောပါတယ်:
မျက်နှာသင်ခန်းစာအပေါ်ဂုဏ်ယူပါတယ်, အလွန်ကောင်းသော, ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းတာငါမတတျနိုငျသ, ငါအရမ်းလေးဖြစ်စေခြင်းငှါ.
ငါ့အကို PC မှ RJ-45 cable ကိုကနေတဆင့်အနီးအနား၏အင်တာနက်မင်္ဂလာပါ / Velox 2MB Pull. ငါက Windows များ7အဆုံးဖြစ်သော 64 bits, အိမ်နီးချင်းအိမ်တော်၌ Encore ENHWI-N3 router ကိုမှ signal ကိုစလှေတျတဲ့ ZTE က ZXDSL စီးရီး modem ရှိပါတယ်. ငါအရာအားလုံးကိုပြုမိပါဘူး, FileZilla ဏ FileZilla Interface ကိုအီးဏ liberei မရှိ Firewall ကို, portas အဖြစ်အခမဲ့ 2100 အီး 2101 ဒါ့အပြင် Firewall ကိုအတွက်. ငါ modem နှင့် Router ကိုအပေါ်သို့ငါ့ဒေသခံ IP ကို ​​redirect ဖို့ကြိုးစားခဲ့, reteador အ modem နှင့်ဘာမျှမအပေါ် IP ကိုထည့်သွင်း. အဘယ်အရာကိုမျှတူညီကောင်လေး, ငါ့ကိုအလင်းပေး, ကျေးဇူးပြု!
2 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2012 သို့ 3:05
Maciel, သင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်အမှားရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကူညီပေးပါရန်ခက်ခဲ. တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တယောက်က FTP နဲ့လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့အ operating system ကို / ကွန်ပျူတာအချို့ကိုအသိပညာရှိရမည်, သငျသညျပြဿနာတစ်ခုပေး, အထူးသဖြင့်လျှင်. အထက်ပါမှတ်ချက်များအတွက်တိတ်တဆိတ်တစ်ဖတ်ကိုယူ, ပြဿနာတစ်ခု / ဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူခွဲခြားသတ်မှတ်စေခြင်းငှါ. ပထမဦးဆုံး FileZilla ပြည်တွင်းဖြစ်အလုပ်လုပ်စေပါ (ftp://127.0.0.1:2100), သာထို့နောက် DDNS သုံးပြီးအင်တာနက်ကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့် Router ကိုအပေါ်ဆိပ်ကမ်းများ၏မှန်ကန်သော redirection အောင် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်.
4 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2012 သို့ 13:52
မိတျဆှေ, ဒီသင်ခန်းစာကသူ့ခံစား, အများဆုံးပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်! Uso အွမ် modem 3g da Vivo င quando uso ဏ ip interno မရှိ FileZilla server ကိုဏ ftp abre, ငါ modem ip ကိုသုံးလျှင်ပိုပြီးမှတ်ချက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး: ကျနော်တို့ရဲ့ IP တိုင်းအသစ် 3G connection ကိုပြောင်းလဲသိသောကြောင့်ငါ modem မှအသီးအသီးအသစ်ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူညွှန်ပြဆိုက်ဖွင့်လှစ်. ဦးကဒီသံသယ၌ငါ့ကိုကူညီနိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတန်ဖိုးထား!
4 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2012 သို့ 13:18
ရာဖေးလ်, ငါ 3G ကျော်တယောက်က FTP ကိုအသုံးပွုဖို့မရ; အော်ပရေတာများကအချို့သောပိတ်ဆို့ခြင်းရှိလြှငျကြှနျုပျမသိ. မခွဲခြားဘဲဒီ, သင့်ရဲ့ 3G modem ကိုသင့်ကွန်ပျူတာ / မှတ်စုစာအုပ်ကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်လျှင်, router မရှိဘဲနဲ့, ဒါကြောင့်သင်အမြဲတမ်း FTP ဆာဗာရယူသင့်ပါတယ် (FileZilla) မှန်ကန်သည့် IP ကိုအင်တာနက်နှင့်အတူ, ရာမြင်နိုင်ပါသည် http://meuip.info/. ယုတ္တိနည်းဤ IP တိုင်း connection ကိုပြောင်းလဲ, ထိုသို့ DDNS DynDNS သို့မဟုတ် No-IP ကိုသုံးစွဲဖို့အကြံပြုသည်အဘယ်ကြောင့်. ဒါဟာသင့်ရဲ့ FTP ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ခွင့်ပြုထားကြောင်း website တစ်ခုရှိပါတယ်, ကိုယ့်ဖို့ဘာသာစကားပြောင်းလဲပစ်ရန်မမေ့မလြော့ပါ “ပေါ်တူဂီ” နှင့် option ကိုစစျဆေး “့မှုသည်”: http://www.net2ftp.com/
4 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2012 သို့ 13:42
မေးခွန်း, ဒါကြောင့်တစ်ဦး porta ကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်သောကြောင့် 2101 အစား 21?
5 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2012 သို့ 23:36
Oi, ငါမူကားအထက်ကိုလည်း Post ကိုအတွက် Post ကိုအတွက်လျင်မြန်စွာရှင်းပြခဲ့သည်ဒီပြောင်းလဲမှုအတွက်အကြောင်းပြချက် http://taylorlopes.com/?p=1021, အချို့သော ADSL ပံ့ပိုးပေးဖို့ကို default တယောက်က FTP ဆိပ်ကမ်းပိတ်ဆို့မှုကြောင့်ဒါပေမယ့်တို (21). Falouuu, ပွေ့ဖက်!
6 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2012 သို့ 7:04
လမ်း, သာမြင်, ငါချောချောမွေ့မွေ့ပြည်တွင်းဖြစ် access လုပ်နိုင်, porta မှတဆင့် 2100. သို့သော်, ငါဝင်ရောက်ဖို့မတတ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအခြားကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် name နဲ့ password ကိုထည့်သွင်းရန် option, ဒီဆိပ်ကမ်းကိုမှတဆင့်. ထူးဆန်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ, ငါသည်တံခါးဝကိုတင်ကြသောအခါ 21, ထို option name နဲ့ password ကိုတက်လေ၏. ထိုသို့ဖြစ်နိုင်, ထိုကွောငျ့, ငါဆိပ်ကမ်းများမှတဆင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင် 21? ပထမဦးဆုံးကြိုးပမ်းမှုအတွက်, ငါ password နဲ့ name ကိုထည့်သွင်းရသောအခါ, အလုပ်မလုပ်ဘဲ. ငါကတံခါးကိုလွှတ်ပေးရန်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူစေခြင်းငှါထင် 21, မဟုတ်? pop-up password နဲ့ name ကိုသူမ၏အားထငျရှားသောကြောင့်… ငါမ-ip ကနေတဆင့်ကြိုးစားခဲ့, အခြားကွန်ယက်မှအခြားကွန်ပျူတာပေါ်မှာ.
PS ။: နှင့် FTP ဥမင်လှိုင်ခေါင်းမှတဆင့်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုပါရန်လွယ်ကူသည်? ဒါဟာရှိအခြို့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်?
10 မတ်လ 2012 သို့ 17:51
ဒါကြောင့်ပြည်တွင်းမှာအလုပ်လုပ်, အခြားကွန်ပျူတာအလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်… ထိုသို့ antivirus ကိုမပါလျှင်မြင်ရ, Post ကိုအဖြစ် firewall settings များပြန်လည်သုံးသပ်ရန်, စသည်တို့ကို… ဒေတာဆိပ်ကမ်းကိုလည်းလွှတ်ပေးရဦးမည် (2101)… သီးခြားတံခါးကို, အကျင့်ကိုကျင့်, call ကိုမှန်ကန်စွာပြုကတည်းက. no-IP ကိုသင်စိုးရိမ်ပူပန်ဖို့လိုအပျပြီးခဲ့သည့်အရာဖြစ်ပါသည်… အခြားတစ်ဦးကို PC ကနေဝင်ရောက်ဖို့, အိုင်ပီအားဖြင့်ခေါ်ဆိုမှုကိုအောင်ကြိုးစားကြည့်ပါ (သို့မဟုတ်နာမတော်ဖြင့်)… သငျသညျကှနျယကျ၏အချို့သောအယူအဆရှိသည်ဖို့လိုအပ်… falouuu!
16 မတ်လ 2012 သို့ 19:17
ငါသည်အခြားသောသူတို့အားခဲ့ကြကြောင်းပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်: ငါပြင်ပ ip ခြင်းဖြင့် server ကို access မနိုင်. ငါအရာအားလုံးကိုကြိုးစားခဲ့ပါတယ်, desativei Anti-virus နဲ့ firewall, reconfigured အရာအားလုံးနှင့်ဘာမျှမ. t1shopper.com အတွက်တံခါးများကိုစမ်းသပ်သူတို့ပြန်လွတ်လာကြသည်မဟုတ်ကြောင်းတွေ့ရှိ. မ 21 မဟုတ် 2100 မဟုတ် 2101, သို့သော်, Router ကို Setting ကို (D-link ကို 524 – 150 ကြိုးမဲ့) သူတို့အဖြစ်ကို unlocked ပေါ်လာ. ငါသည်ငါ့ router ကိုအပေါ် SPI configuration ကိုရှာတွေ့ဖို့မလမ်းရှိကြောင်းသတိထားမိ, ဒီပြဿနာဖြစ်စေခြင်းငှါ?
13 မတ်လ 2012 သို့ 12:48
... တံခါးစမ်းသပ်နေဖြင့်ပွင့်လင်းဖြစ်သင့် ... သင်သည်သင်၏ router ကိုအင်တာနက်အပေါ် "မျက်နှာ" ဖြစ်ပါတယ်လျှင်မြင်ရဖို့ရှိသည်ပြဿနာတစ်ခု SPI ဖြစ်ဟန်မထားဘူး, အခြားစကား, သူကအင်တာနက်ကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်သို့မဟုတ်မည်သည့်ကြားခံဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာရှိပါတယ်လျှင် Router ကအငျတာနကျပျေါတှငျပါလျှင် ... မြင်သူပါလျှင်, ရိုးရှင်းစွာအဘရောက်ဇာကိုအဘို့သင့် setting များကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကမှန်ကန်သည့် IP ကိုအင်တာနက်လက်ခံရရှိလျှင် STATUS စစ်ဆေး ... တစ်ဦး shared ကိုအင်တာနက်လျှင်, အမျိုးအစားရေဒီယို, သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကို, ထို့နောက်ကခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မည်, သငျသညျအဓိကအ router ကိုကရမဟုတ်လျှင် (အင်တာနက်ပေါ်မှာ) အ redirection ပြုပါ (NAT) သင်တို့အဘို့အ ...
16 မတ်လ 2012 သို့ 19:25
ဘရူနို Mondini ကပြောပါတယ်:
Amigão, သင့်ရဲ့သင်ခန်းစာကအလွန်ကောင်းလှ၏, မတော်တပို့ခကျြမြား!
ဒါကြောင့်, ငါ setup ကို FileZilla, sussa တံခါးတို့ကိုပြန်လွှတ်ပေးခြင်းနှင့်ခဲ့, ငါကဒေသခံအိမ်ရှင်အသုံးပြုတဲ့အခါသို့သော်လည်းငါသည်သာအ folder ကို access လုပ်နိုင်.
ရတဲ့အခါစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံဝေးလံခေါင်သီ access ကို, သူ login နဲ့ password ကိုမေးတယ်နှင့်အချိန်ကုန်သွားပြီပေးသည်. ရိုးရှင်းစွာအမဝင်နိုင်.
နောက်ဆုံးမှာ, အဝေးကနေမလာပါဘူး! :\_
အခြားမေးခွန်းတစ်ခု: သငျသညျဝေးလံခေါင်သီ access ကိုအိမ်ရှင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် “hostdeexemplo.no-ip.org” အစားအသော IP များ??
17 ဧပြီလ 2012 သို့ 1:40
ယခုလည်းဒေသခံအိမ်ရှင်အပေါ် browser ကိုကြည့်ရှုခွင့်ဖြစ်ပျက်၏ log ကိုလိုက်နာပါ. ဒါဟာတစ်စုံတစ်ဦးကအသုံးပြုခွင့် remotely ဖို့ကြိုးစားပါတယ်သောအခါအတူတူမှတ်တမ်းင်.
သငျသညျအကြှနျုပျကိုကူညီဖို့ဘယ်လိုသိလျှင်, အစဉ်အဆက်ကတည်းကကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်. :: D
(000084)17/04/2012 01:47:57 – (အတွက် logged မဟုတ်) (127.0.0.1)> 220-FileZilla Server ကိုဗားရှင်း 0.9.41 beta ကို
(000084)17/04/2012 01:47:57 – (အတွက် logged မဟုတ်) (127.0.0.1)> 220-တိ Kosse ကရေးသား (Tim.Kosse@gmx.de)
(000084)17/04/2012 01:47:57 – (အတွက် logged မဟုတ်) (127.0.0.1)> 220 သွားရောက်ကြည့်ရှုပေးပါ http://sourceforge.net/projects/filezilla/
(000084)17/04/2012 01:48:03 – (အတွက် logged မဟုတ်) (127.0.0.1)> USER မှဧည့်သည်
(000084)17/04/2012 01:48:03 – (အတွက် logged မဟုတ်) (127.0.0.1)> 331 convidado ဘို့လိုအပ်တဲ့စကားဝှက်
(000084)17/04/2012 01:48:09 – (အတွက် logged မဟုတ်) (127.0.0.1)> PASS တ
(000084)17/04/2012 01:48:09 – ဧည့်သည် (127.0.0.1)> 230 အပေါ် logged
(000084)17/04/2012 01:48:17 – ဧည့်သည် (127.0.0.1)> SYST
(000084)17/04/2012 01:48:17 – ဧည့်သည် (127.0.0.1)> 215 UNIX တွင် FileZilla အားဖြင့်အတုယူ
(000084)17/04/2012 01:48:17 – ဧည့်သည် (127.0.0.1)> PWD
(000084)17/04/2012 01:48:17 – ဧည့်သည် (127.0.0.1)> 257 “/” လက်ရှိ Directory ဖြစ်ပါတယ်.
(000084)17/04/2012 01:48:17 – ဧည့်သည် (127.0.0.1)> TYPE ငါ
(000084)17/04/2012 01:48:17 – ဧည့်သည် (127.0.0.1)> 200 ငါသတ်မှတ်ထားခြင်းပုံစံ
(000084)17/04/2012 01:48:17 – ဧည့်သည် (127.0.0.1)> EPS
(000084)17/04/2012 01:48:17 – ဧည့်သည် (127.0.0.1)> 421 socket မဖန်တီးနိုင်ခဲ့.
(000084)17/04/2012 01:48:17 – ဧည့်သည် (127.0.0.1)> PASV
(000084)17/04/2012 01:48:17 – ဧည့်သည် (127.0.0.1)> လုံးလုံး
(000084)17/04/2012 01:48:17 – ဧည့်သည် (127.0.0.1)> 221 သွားတော့မယ်
(000084)17/04/2012 01:48:17 – ဧည့်သည် (127.0.0.1)> အဆက်ပြတ်.
17 ဧပြီလ 2012 သို့ 1:50
Karlos Bahia ကပြောပါတယ်:
တေလာဟဲလို, ငါ Karlos Bahia ရယ်, ငါတော်တော်များများသောအရပ်နှင့် certinho.Aprovado ရဲ့တက်စမျးသပျ, သင့်ရဲ့ Blog ကိုမှတ်ချက်ဖြစ်ပါသည် 10!
5 သြဂုတ်လ 2012 သို့ 19:36
ငါသည်တ D-Link modem များ, ကြိုးမဲ့ AP-router reteador ချိတ်ဆက်
ငါသည်ဤ option ကို NAT မတှေ့
အတွက် configuration ဒါပေမဲ့ဘာမှမရိုက်ထည့်.
သို့မဟုတ်ငါ D-LINK modem settings ကိုရိုက်ထည့်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး?
အင်တာနက်နှင့်အတူ 15 ကို MB, လွှဲပြောင်းအေးမြသည်?
ပုံစံ, ဆာဗာဖြစ်လိမ့်မယ် 10 ကို MB, သို့မဟုတ် client ကို (1MB သို့မဟုတ် 2MB ဥပမာအားရလိမ့်မည်သင်ပို့ပါလိမ့်မယ်) ဒါကြောင့်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ်?
31 သြဂုတ်လ 2012 သို့ 18:58
ငါသည်တ reteador ချိတ်ဆက် D-Link ကိုမော်ဒယ်များ, ငါ NAT option ကိုမှဆက်စပ်ငါ၏အ router ကိုအပေါ်ဘာမှမတှေ့နိုငျ.
ထိုအခါငါ roetador မှပေးပို့သောကေဘယ်ကြိုးအဆက်ပြတ်, နှင့် modem ရွေးချယ်စရာရိုက်ထည့်ဖို့ကို PC သို့လက်ျာကွန်ယက်ကို cable ကို conetei, ပြီးသားတစ်ဦး NAT option ကိုလည်းမရှိ, သူသည်မိမိအမှကွဲပြားခြားနားသောကွောငျ့, ငါ setup ကိုလျှင်ထိုအခွင့်ကိုမသိရပါဘူး.
ဒါပေမယ့်ငါမ FileZilla ကလိုင်းချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားသောအခါ :
ပြည်နယ်:	ဆက်သွယ်ထားသော 201.58.59.125:2100…
ပြည်နယ်:	connection ကြိုးပမ်းမှုနှင့်အတူပျက်ကွက် “ECONNREFUSED – ဆာဗာကငြင်းဆန်ခဲ့သည် connection”.
အမှား:	server ကိုမချိတ်ဆက်နိုင်ခဲ့
3 စက်တင်ဘာလ 2012 သို့ 18:35
227 Passive Mode ထဲဝင်ပါ (ip)
ဟီတိုရီ 21 ဟီတိုရီ 2048-2148 ဟီတိုရီ.
11 စက်တင်ဘာလ 2012 သို့ 22:42
24 စက်တင်ဘာလ 2012 သို့ 20:26
လမ်း , ဟီတိုရီ. ဟီတိုရီ , ဟီတိုရီ. ဟီတိုရီ. ကျေးဇူးတင်ပါသည်
25 စက်တင်ဘာလ 2012 သို့ 1:28
ဟီတိုရီ (http://taylorlopes.com/?p=1381&cpage=1#comment-16173) ဟီတိုရီ, ဟီတိုရီ, ဟီတိုရီ (127.0.0.1) , ဟီတိုရီ (192.168.0.3), ဟီတိုရီ (ဟောင်း: 188.155.22.245).
ဟီတိုရီ, ဟီတိုရီ “ဟီတိုရီ”ဟီတိုရီ (ဟောင်း: ဟီတိုရီ), ဟီတိုရီ “ဟီတိုရီ / ဟီတိုရီ ….500 syntax အမှား, ဟီတိုရီ” ဟီတိုရီ, ဟီတိုရီ “ဟီတိုရီ:// ” ဟီတိုရီ ” တယောက်က FTP:// “. ငါကဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်လျှင်ကြည့်ဖို့ DynDNS သုံးပြီးအပေါ်စီစဉ်.
Obs: ငါ option ကိုမှတ်သား “အောက်ပါ IP ကိုအသုံးပြုပါ:” (တွင် “passive mode ကို settings ကို” တွင် “Options ကို) ငါသည်ထိုမျှမ-ip ထား , ဒါပေမဲ့ကြောင့်အမှား၏, ဒါဟာအလုပ်မဖြစ်ဘူး.
27 ဇန္နဝါရီလ 2013 သို့ 2:57
Oi Pablo, ထိုအခါ, သငျသညျ ftp နှင့်အတူအကဲဆတ်သောခေါ်ဆိုခ left:// (မဟုတ် http://)? သင်သည်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာကွန်ရက်အတွင်း၌မှဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေနေတယ်ဆိုရင်, အိုင်ပီဒေသခံပြုပါ servidor တယောက်က FTP ကိုသုံး, သင်သည်သင်၏ဒေသခံကွန်ယက်၏အပြင်ဘက်မှန်လျှင်, ထို့နောက်ဒိုမိန်းအဘယ်သူမျှမ-အိုင်ပီသို့မဟုတ် DynDNS ကိုသုံး, ငါသည်ဤလိုက်တယ်ပြဿနာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရပါတယ်ကွောငျ့,. အဘယ်သူမျှမက-IP ကိုအမှန်တကယ်သစ်တစ်ခုက IP နှင့်အတူ updated ခံကြောင်းသေချာပါစေ, ပြောင်းလဲမှုများ၏အမှု၌; အဘယ်သူမျှမက-IP ကိုဆိုက်၌သင်တို့ရှိသမျှသည်အချိန်လိပ်စာအပြောင်းအလဲမျှမ-IP ကိုသတိပေးခံရဖို့ဆာဗာပေါ်မှာ install နိုငျသော application တစ်ခုရှိပါတယ်ရှိပါတယ်… မိနျ့တျောမူ၏!
27 ဇန္နဝါရီလ 2013 သို့ 9:47
ထိုအခါ, သို့မဟုတ် FTP အလုပ်လုပ်, ငါလက်ရှိတွင်အင်တာနက်အစီအစဉ်တိ Infinity သုံးပြီး Android ကိုအားဖြင့်ချိတ်ဆက်တာပါ. ငါ ip မှာ dynamic ခြင်းဖြင့် server ကို access လုပ်နိုင်, ဖိုင်တွေလွှဲပြောင်းပေးနိုင် (ဒါပေမဲ့ Speed ​​ကိုနှေးကွေး Eh ကြောင်းအသုံး 2G ကိုမွငျ ).
အိုပြဿနာကယ့်ကို Non-ip မဟုတ်ပါဘူး, အ configured host name ကိုဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားနေသည့်အခါမှတ်တမ်း FileZilla တှငျငါအောက်ပါအချက်အလက်များရ.
” ဟီတိုရီ / ဟီတိုရီ
500 syntax အမှား, command ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရ
500 syntax အမှား, command ကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရ”
Obs: ငါက Android ပေါ်မှာ Chrome ဘရောက်ဇာကိုရယူနေပါတယ်.
ဒါဟာဆာဗာဆက်သွယ်နိုင်သည်, ပိုပြီးဟာ HTTP အဖြစ်လျှောက်ထား, နှင့်ကံမကောင်း, ငါတယောက်က FTP ကြောင့်တောင်းဆိုဖို့ထို site setting ကိုအပေါ်ကိုမတှေ့နိုငျ.
OBs: ငါ DynDNS အတွက်မှတ်ပုံတင်ဖန်တီး, ဒါပေမယ့်အပြီး “ပျဉ်း site ကိုဦးခေါင်းကိုဖွင့်”, ငါကပိုပြီးအခမဲ့အသုံးပြုခွင့်ပေးတော်မမူကြောင်းတွေ့ရှိရ.
27 ဇန္နဝါရီလ 2013 သို့ 20:09
အလန် Pereira ကပြောပါတယ်:
Ufa, ဒါကြောင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့! လိုက်နာပါသို့မဟုတ်ပြည့်စုံသင်ခန်းစာ, ဒါပေမယ့်ငါကအင်တာနက်ကနေတစ်ဆင့်ချိတ်ဆက်ဖို့မတတျနိုငျ, ထို့နောက်အကြံပေးချက်များအတိုင်းလိုက်နာနှင့်တံတားအတွက် modem ထား, အ PPPoE authentication ကိုလိုလားသူ router ကိုဖြတ်သန်း. အလုပ်အချိန်!
31 ဇန္နဝါရီလ 2013 သို့ 22:29
လူးဝစ်ဖိလစ်ပီ Figueiredo ကပြောပါတယ်:
မင်္ဂလာပါ, ငါက router ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပြင်ပ hard drive ကိုများအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်မယ်လို့ရှိမရှိစဉ်းစားမိ (အ TP-Link ကို TL-WR1043ND ဖိုင်တစ်ဖိုင်ဆာဗာကို function ကိုရှိပါတယ်, ဥပမာအား).
ဒါက Seagate GoFlex Net ကမီဒီယာမျှဝေခြင်းစက်ပစ္စည်းနှင့်အတူဖြစ်နိုင် (Shtak100) တစ်ခုနှင့်ပြင်ပ hard drive ကိုကခွဲဝေ, ငါမူကားဘရာဇီးမှာရောင်းဖို့ဒီ STAK100 ကိုမတှေ့နိုငျ (ကိုယ့်ငါဆောင်ခဲ့သော site တစ်ခုကိုတွေ့ပေမယ့် 5x ပိုပြီးစျေးကြီးကုန်ကျ, အရာလှိမ့်ပါဘူး).
26 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2013 သို့ 14:16
မင်္ဂလာပါ, သာ Router ကိုဘယ်လိုမမြင်မိပါဘူး, ယခုသငျသညျ FileZilla မတပ်ဆင်နိုင်သည်ကို.
28 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2013 သို့ 20:59
မင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေတစ်, ငါပြင်ပဆက်သွယ်မှုမရနိုင်, အဖြေတစ်ခုရှိပါတယ်?
19 မတ်လ 2013 သို့ 22:11
မားကို့စ, လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်အဖြေကိုမှအပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကြည့်ယူ, ကူညီစေခြင်းငှါ. ဒါမှမဟုတ်ပိုကောင်းတဲ့နားလည်ရန်ကိစ္စကိုပိုမိုတိကျတဲ့ဖြစ်… မိနျ့တျောမူ၏!
29 မတ်လ 2013 သို့ 21:56
ရိုဒရီဂို Curie ကပြောပါတယ်:
တေလာ, ပို့စ်အပေါ်ဂုဏ်ပြုလွှာနှင့်ယခုအထိပြထားတဲ့သည်းခံခြင်း; ငါသည်လည်းဒီပိုက်ကွန်အပေါ် FileZilla ကို set up ဖို့အကောင်းဆုံးသင်ခန်းစာတွေ့ရှိရ. တစ်ဦးတည်းသာအသိပေးချက်: သငျသညျပြတင်းပေါက် firewall ကိုဖွင့်ဖို့ရှိသည်အစီအစဉ် FileZilla server တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်, မ FileZilla ကဆာဗာကို interface ကို, မုချ?
ငါပိုမိုလေ့လာသင်ယူလျှင်ငါကြည့်ရှုခြင်းငှါသင့်ရဲ့ Blog ကိုတခုတခုအပေါ်မှာမျက်စိစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်.
4 ဇွန်လ 2013 သို့ 23:25
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ရိုဒရီဂို. လမ်း, တွင် 2010 ငါတံဆိပ်ပင် FileZilla server ကို interface ကိုခဲ့သည် post အခါ,. ယနေ့ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုပါကငါမသိ… မိနျ့တျောမူ၏!
5 ဇွန်လ 2013 သို့ 0:32
မိတျဆှေမှန်လာသောအခါပိုပြီး access ကိုတခြားနေရာကို passive mode မှာဝင်ရောက်ခွင့်ကိုတောင်းခံဖို့အမှား၏အရာအားလုံးကိုပြု၏, ငါ့ ip အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ငါ့ကိုပြသထားတယ် 8,53
22 ဇွန်လ 2013 သို့ 11:12
Oi ရာဖေးလ်, ငါသည်သင်တို့ကမှတ်ချက်များအတွက်တစ်ဖတ်ပေးအကြံပြု. သင့်အနေဖြင့်ပြဿနာရဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်, ထိုသို့ကူညီရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်; FileZilla ကသငျသညျဖော်ပြခဲ့သည်ဖြစ်နိုင်ချေပြဿနာတွေစစျဆေးနိုငျတဲ့ Log ရှိကြောင်းတွေ့မြင်. ငါဖန်ဆင်းမှတ်ချက်မှာကြည့်လိုက်ပါ “တေလာ Lopes 8 မတ်လ 2011 တွင် 9:33”. ပြဿနာတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်နှင့်ပဲကိုရွေးချယ်ခြင်းကအလုပ်မလုပ်လုပ်သူတစ်ဦးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လည်းကြည့်ရှုပါ “အောက်ပါအိုင်ပီ em တွေမှာ Passive mode ကိုဆည်တည်းကိုသုံးပါ”. နောက်ဆုံးမှာ, ပြည်တွင်းဖြစ်အလုပ်ကိုသာထို့နောက်အတွက်ပြင်ပကြိုးစားကြည့်ပါ (အင်တာနက်). မည်သည့်အမှုကိစ္စတွင်, မှတ်ချက်များကိုဖတ်, ဒါဟာလုံလောက်တဲ့အကြံပေးချက်များရှိပါတယ်. ကောင်းသောကံ!
23 ဇွန်လ 2013 သို့ 0:08
ချစ်သောမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ထက်ပိုမယ့် file ကို zilla client ကိုအားဖြင့်အရာခပ်သိမ်းပိုင်ခွင့် access ကိုငါ့အ hd ကိုအခြားအင်တာနက်လုပ်ခဲ့တဲ့လေ့လာစူးစမ်းယူပြီးငါ့ကိုအောက်ပါအမှားပွောတဲ့အခါပိုပြီးဘောလုံးကိုပြသသည်.
အမှားအ FTP ဆာဗာပေါ်မှာဤဖိုင်တွဲကိုဖွင့်လှစ်. သင် folder ကိုဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုချက်ရှိသေချာအောင်.
227 passive mode ကိုဝင် 192,168,0,2,8,53
24 ဇွန်လ 2013 သို့ 17:56
Mto ကောင်လေးအားလုံး q အလှဆုံးသင့်ရဲ့ထဲကအင်တာနက်ရှာဖွေငါအမှားများမပါဘဲစနစ်တကျလုပ်နိုင်ရှင်းပြခဲ့သည်တိုက်ခိုက်ခဲ့, ဒီမှာတံခါးကိုကျော်သူပြီးသားအရာအားလုံးကိုပြီးသား play3 အဖြစ်တံခါးရွက်အဘို့အ loaded ရွေးချယ်စရာ pre ပါပြီပါဘူးအသက်ရှင်တစ်ခုတည်း device ကို Eh ငါ၏အ Router က / modem နှင့် wifi အဖြစ် mto ရိုးရှင်းတဲ့ခဲ့သည်, Xbox, အခြား Eh က q အပေါင်းတို့ငါသည်ငါ့အိမ်မှာထဲက mto ပြင်ပအလုပ်ကိုအဖြစ်အလိုအလျှောက်နှင့် tals ဖောက်သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ယခုကပဲ vlw ကိုမှန်ကန်ယခု 8mg အင်တာနက်တယ်, ငါ့ HD မှာဒီက q ဖိုင်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုလိုသည် 400$ အင်တာနက်ကိုရွေးကောက်ပွဲ downloads, ပြုပါနှင့်ငါတို့နှင့်အတူဤအသိပညာမျှဝေဘို့ပြင်ပ hd ကို mto ကျေးဇူးတင်စကားနှင့်ဂုဏ်ပြုလွှာအပေါ်အများကြီးယူမရှိတော့လိုအပ်ပါတယ်!
လူယခုအထိအချည်းနှီးသော parabens သောကြောင့်, လက်ျာသင်၏အသက်တာ၌အရာအားလုံး
5 စက်တင်ဘာလ 2013 သို့ 12:56
5 စက်တင်ဘာလ 2013 သို့ 13:53
Dionne Gonçalves ကပြောပါတယ်:
ငါသည်ခပ်သိမ်းသော setting များကိုဖန်ဆင်းတော်, ဒါပေမဲ့အမြဲဒီအမှားကြုံတွေ့ရ: connection ကြိုးပမ်းမှုနှင့်အတူပျက်ကွက် “ECONNREFUSED – ဆာဗာကငြင်းဆန်ခဲ့သည် connection”.
15 ဇွန်လ 2015 သို့ 21:29
ကားလို့စ် Alexandre ကပြောပါတယ်:
သင့်ရဲ့သင်ခန်းစာများစွာကိုအင်တာနက်လျော့နည်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များကိုရှိပါတယ်, ရိုးရှင်းခြင်းနှင့်လူအပေါင်းတို့ရှေ့မှာငါဖတ်ဖြစ်ပါတယ်, သူကငါ့ကိုအောင်မြင်မှုရဖန်ဆင်းတော်မူသောတ!
ငါမှတ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး, သင်မူကား, ဒါကြောင့်ခံထိုက်.
28 ဇွန်လ 2015 သို့ 19:02
မူပိုင်ခွင့် © 2022 taylorlopes.com အောက်တိုဘာလကတည်းက 2012, 3.475.126 ဝင်ရောက်ခွင့်